ဘလော့ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ငါတိုင်းလူငယ်တစ်ဦးဖတ်ရန်လိုအပ်သည်ထင်သော "ခရီးစဉ်ရဲ့ရေးထားလျက်ရှိ၏စာအုပ်. ယရှေုသညျနှငျ့ဤမျိုးဆက်သည်မိမိစိတ်အားထက်သန်မှုတိုင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်ကျယ်သောအသံနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတဆင့်လာ. ငါသည်ဤသတင်းစကားကိုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ရဲ့မျိုးဆက်တစ်ဆက်အပေါ်ရှိပါတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့မြင်မစောင့်နိုင်။ "- Lecrae, ဂရမ်မီဆုပေးပွဲ- အနုပညာရှင် @lecrae "ထအနိုင်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၏နှလုံးကိုသိမ်းပိုက်တဲ့အင်မတန်ထူးခြားဆန်းကြယ်စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်. အဖြစ်မကြာမီငါကတက်ခူးသကဲ့သို့ငါကဆငျးသကျကိုမထားနိုင်. ခရီးစဉ်အစစ်အမှန်ဖြစ်ရန်သင့်အားစိန်ခေါ်, သငျတို့သမည်ကဲ့သို့သင်၏အသက်တာဒီနေ့ကမ္ဘာမှာလူငယ်တစ်ဦးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဖြစ်အသက်ရှင်ရန်ပြသထားတယ်. ဂရိတ်ဖတ်။ "- ဆမ်ငါ, NFL linebacker, လူသားချင်းစာနာထောက်ထား @thesamacho "ခရီးစဉ်ငါငယ်ငယ်တုန်းကငါဖတ်ပါတယ်လိုတဲ့စာအုပ်ရေးသားခဲ့သည်. သူ၏စိတ်အားထက်သန်မှု, ဉာဏ်ပညာကို, နှင့်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များကိုစိန်ခေါ်ဖို့အလိုဆန္ဒညျဘုရားသခငျ၏ခရီးစဉ်နှင့်သူကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးအားဖြင့်လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကတဆင့်လုပ်နေတာအလုပ်ကိုတစ်ဦးသေတမ်းစာဖြစ်ပါတယ်။ "- Kirk က Franklin, ဂရမ်မီဆုချီးမြှင့်- ငါထစာဖတ်ခြင်းကိုခစျြ "@kirkfranklin အနိုင်ရနှင့် Multi-ပလက်တီနမ်မှတ်တမ်းတင်အနုပညာရှင်. ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက် Medi ကိုတွေ့သည်ဤစာအုပ်ထဲတွင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ- သူတို့ကိုငါဖတ်ပြီးနောက်စာမျက်နှာများကိုကျော် tating. ငါအားပေးအားမြှောက်ခဲ့သည်, မှုတ်သွင်းခံ, နှင့်အားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောလမ်းကိုစိန်ခေါ်. အဆိုပါယဉ်ကျေးမှုကိုကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်သျောလညျးဘုရားသခငျဖြုန်းဖို့မြျှောလငျ့ ...
ခရီးစဉ်ရဲ့အသစ်စာအုပ်, တက်, ယခုထွက်သည်! အောက်ကစာအုပ်ယောဟန် Piper ရဲ့စကားချီး Read. သင့်အနေဖြင့်စာအုပ် pre-order နှင့်ခရီးစဉ် Lee ကနှင့်သူ၏စာအုပ်အကြောင်းကျွန်မသဘောကျတယ်အဓိကအရာ Risebook.tv တစ်ခုမှာမှာပိုပြီးထွက်ရှာတှေ့နိုငျ, တက်, ရိုနှင့်ဆီလျော်မှု၏ဆက်စပ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်. အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှု၌ဆက်စပ်မှုမှာရည်ရွယ်ချက်မှာဘုံဖြစ်ပါသည်. အေးမြနေရာအနှံ့ဖြစ်ပါသည်. Mack Stiles ကပြောပါတယ်အဖြစ်, ကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျအမြားစုမှာခရစျယာကြီးပြင်းလက်သီးကိုကွောကျရှံ့ရမယ်; အမေရိကန်များထမြောက်စေတော်မျက်ခုံးကိုကွောကျရှံ့. ဒါဟာကျနော်တို့အေးမြမဟုတ်ဆိုလိုသည်. သက်ဆိုင်ရာမဟုတ်. သို့သော်ရိုမှာရည်ရွယ်ချက်ရှားပါးသည်. ရိုအဟောင်းခံစားရ. ဒါဟာ unexciting ခံစားရ. ဒါဟာအေးမြမယ့်. သို့သော်လူတိုင်းသိတယ်, နက်ရှိုင်းသောကဆင်း, ရိုဝင်သောအခါ, လူ့အသက်ကိုအပေါငျးတို့သမျိုးစုံပြပွဲဖြစ်လာ. ပိန်သော. Glib. တိမ်သော. ပလပ်စတစ်. ဗလာ. အဆုံးမှာ, အဓိပ်ပါယျမရှိသော. ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ခဲ့သည်. "Cool အပွောငျးအလဲဖြစ်ပါသည်, ကျွန်တော်ခရီးစဉ် Lee က၏က "ဖွစကားသည်အရှငျနထေိုငျမရနိုငျ. တိကျစွာ. ရုံအေးမြဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားနေ, ကိုယ့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်, နိမ့်သည်. ထိုအခါခရီးစဉ် Lee ၏စကားသံကိုအော်ဟစ်, တက်! ကြည့်ဖို့ဒါအများကြီးပိုရှိပါတယ်, သိရန်, ချစ်ဖို့, ခံစား. သူတို့ပျော်စရာလျှော့ချမရနိုင်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ရပ်မှန်များရှိပါတယ်. သူ၏စကား "ပျော်စရာ" "ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်" "ဘောလုံး" "ပါတီ" ရီစရာအသံ ...
လူတွေကသူ့အသစ်ကိုစာအုပ်အကြောင်းသည်အဘယ်သို့ခရီးစဉ်တောင်းဆို. ဤတွင်သူကခေတ္တအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျ Risebook.tv မှာစာအုပ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်
ဟေ့ကောင်တွေ! အကြှနျုပျ၏စာအုပ်ထဇန်နဝါရီလအပေါ်ထုတ်သည် 27 (လာမည့်အပတ်!) ငါသည်လည်းသင်တို့၏အကူအညီလိုအပျ. ကျွန်တော်တို့ဟာအွန်လိုင်းနှင့်၎င်းတို့၏လူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်တစ်ဦးလမ်းရေးအဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကိုကိုစာအုပ်အကြောင်းကိုစကားလုံးဖြန့်ကိုကူညီနိုင်သူတွေကိုရှာနေ. သငျသညျကို http မှာစာအုပ်အကြောင်းကိုပိုမိုထွက်စစျဆေးနိုငျ://RiseBook.tv အကြှနျုပျ၏ပဌနာသညျဘုရားသခငျဤစာအုပ်ကိုယူပြီးတက်ရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်စိန်ခေါ်ရန်၎င်း၏သတင်းစကားကိုသုံးပါနှင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်. တဖန်သင်တို့ကိုစာအုပ်အဘို့ငါတို့လမ်းရေးအဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တက်လက်မှတ်ထိုးကသတင်းစကားဖြန့်ကိုကူညီနိုင်. ဒီနေရာတွင်ကအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဖွင့် ... 1 - ဒီမှာ Apply. ကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျအကွောငျးကိုပိုမိုသိပါစေ, သငျသညျအသင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ချင်အဘယ်ကြောင့်, သငျတို့သလူမှုရေးမီဒီယာနှင့်ငါတို့နှင့်အတူအခြားအွန်လိုင်းလင့်ခ်ဝေမျှ. အကြှနျုပျ၏ထုတ်ဝေသူလျှောက်လွှာကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ရှေးကောကျလျှင်လိမ့်မည် ...2- စာအုပ်တစ်ဦးကြိုတင်မဲမိတ္တူ Read. သူတို့ကဖတ်မှသင်စာအုပ်တစ် PDF ကိုမိတ္တူပေးပို့ပါလိမ့်မယ်.3- ပုဂ္ဂလိကက Facebook Group ကို Join. သငျသညျအကြှနျုပျ၏ထုတ်ဝေသူကနေပုဂ္ဂလိကကို Facebook Group ကို join ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခံယူပါလိမ့်မယ်. အဲဒီမှာ, သင်သည်သင်၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူမျှဝေဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအကြောင်းအရာတစ်တန်ရလိမ့်မယ်. ရှိပါတယ်...
စာအုပ်ကောက်နုတ်ထားပါတယ်: အ Bench မနာလိုမနေပါနဲ့
ငါအထက်တန်းကျောင်း varsity ဘတ်စကက်ဘောကစား. ဒါကလုံးဝဟုတ်မှန်ကြေညာချက်င် (သင်စကားလုံးကစားသတ်မှတ်ဖို့ကျွန်မကိုအတင်းမဟုတ်လျှင်). ငါငယ်လေးတစ်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး, သင်တစ်ဦးအကြီးတန်းခဲ့ကြလျှင်သင် varsity အသင်းအပေါ်တစ်ဦးပွဲချင်းပြီးတယ်. ငါဘတ်စကက်ဘော၏ဂိမ်းကိုချစ်, ဒါပေမယ့်ငါကကစားထက်ကစောင့်ကြည့်မှာအများကြီးပိုကောင်းတာ. ငါ "C'mon ကစားသမားဆုံးမများနှင့်ညီတည်းနိုင်!"All-ကြယ်ပွင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူဒိုင်လူကြီးမှာ. သို့သော်အဖြစ်ဝေးကဝင်အဖြစ်ဖွင့်. အကြှနျုပျ၏ကျောင်းတွင်အမှန်တကယ်ဘွဲ့ရနိုင်ရန်အတွက်အားကစားကစားအကြောင်းကိုဒီထူးဆန်းတဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့, သော်လည်း, ဒါကြောင့်ကိုယ့်တိုင်းသောကြာနေ့ညအထိကိုက်ညီနှင့်ရှက်ကြောက်ခြင်း၌ငါ၏ဦးခေါင်းသည်ဆွဲထားခိုင်းခဲ့သည်. အဆိုပါရပ်တည်ချက်အမြဲအိမ်မှာဂိမ်းတွေအတွက်အပြည့်အဝရှိကြ၏. စိတ်လှုပ်ရှားမိဘများနှင့်ကျောင်းသားများ-အများအပြား mine- ၏မိတ်ဆွေများကသူတို့ကို၏အသင်းကိုအထောက်အကူပြုရန်ဖွင့်ပြသ. ဝမ်းနည်းစရာ, သူတို့ဖြစ်ကောင်းငါပြုသကဲ့သို့ဂိမ်းထဲမှာခြားနားချက်၏အဖြစ်တာလုပ်. ငါအချိန်ထဲကနေအချိန်အား bleachers သို့တစ်ချက်လို, လူများအပေါင်းတို့သည်စဉ်းစားခဲ့ကြသောအရာကိုအံ့ဩ, အထူးသဖြင့်ငါ့အဖေ. ငါကသူကိုနှစ်ဦးစလုံးစောင့်ကြည့်ဖို့ပဲရှိသဘောပေါက်ထင်, ငါမူကားပိုကောင်းတဲ့ထိုင်ခုံရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပျက်. တကယ်တော့ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ဖန်ဆင်းတစ်ခုတည်းသောအချိန်မှာ ...
စာအုပ်ကောက်နုတ်ထားပါတယ်ထလော့: 7:00 နံနက်. တက္ဏဗေဒ
ငါတဆယ်နှစ်အရွယ်မှာနှင့်ငါ့အသက်ကိုအထဲကအတှငျးလှည့်ခံခဲ့သည်. ငါ့နာမကိုနှင့်အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲမ, ငါမူကားအကြောင်းကိုအခြားအရာအားလုံးခဲ့. ငါရှေ့တော်၌တနှစ်တွင်သို့မဟုတ်နှစ်ခုခဲ့ထက်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်. ငါကလူသစ်ကိုအမည်ဝှက်နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ကိုယ်ကိုကောလိပ်ကျောင်းကိုသွားနှင့် re-ဖန်တီးသောအခါတူမဆိုလိုဘူး; ငါသိသိသာသာတစ်ခုခုငါ့ကိုအတွင်းပိုင်းအပေါ်သွားပြီးဆိုလို. ငါခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း. ငါအသစ်ခံစားခဲ့ရ. ငါအသကျရှငျခံစားခဲ့ရ. ငါစကားကိုနားထောငျမညျ့သူမည်သူမဆိုဖို့ကကြေညာခဲ့ရသည်နိုင်အောင်ကောင်းသောခံစားခဲ့ရ, အထူးသဖြင့်ငါ၏အအရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစု. လူတိုင်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ငါ့ကို-အချို့အတွက်အပြောင်းအလဲမှကွဲပြားခြားနားတုန့်ပြန်, ခုခံ-မဟုတ်တဦးတည်းစကားပြောဆိုမှုအမြဲငါ့ထံသို့ထွက်ရပ်နိုင်နှင့်အတူအခြားသူများကို. ငါကိုအလွန်လေးစားတော်မူသောအသက်ကြီးသောသူနှင့်အတူစကားပြောခဲ့, ငါ၏အလူနေမှုပုံစံစတဲ့နှငျ့ဘုရားသခငျဂုဏျတငျအဘို့အကြှနျုပျ၏ဂိမ်းအစီအစဉ်ကိုရှင်းပြဖို့စိတ်လှုပ်ရှား, အထူးသညျငါ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသန့်ရှင်းစင်ကြယ်. ငါကအကြောင်းအေးဆေးဖြစ်ဖို့ကြိုးစား, ဒါပေမယ့်၌ငါ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကျင်းပရန်အမြဲခက်ခဲခဲ့ပါတယ်. ထိုစကားရွံရှာဘွယ်သောရောနှောအရှိန်အဟုန်မှာငါ့လျှာမှဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ်, ငါကသူငါဖြစ်သကဲ့သို့အဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားမဟုတ်ခဲ့သောသဘောရတယ်. သူကတိတ်တဆိတ်နားထောငျဖို့ကြိုးစားနေခဲ့, သို့ရာတွင်သူ၏မျက်နှာစကားရပ်သည်သူ၏ရှေ့တော်၌တုန့်ပြန် ...
ဤတွင်ခရီးစဉ်ရဲ့ပဉ္စမစတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်ထဘို့ရှိသမျှကိုသီချင်းစာသားတွေဟာ. အသီးအသီးလမ်းကြောင်းများအတွက်သီချင်းစာသားကြည့်ရှုရန်သီချင်းခေါင်းစဉ်ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ. ခံစားကြည့်ပါနဲ့မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူဝေမျှ! 1. တက် 2. တွင်အလင်းအိမ် 3. Shweet 4. က Manolo ပေ. Lecrae 5. သင်သိပါမနေပါနဲ့ 6. အားလုံး Up ကိုထလော့ (Interlude) 7. အားလုံး Up ကိုထလော့ 8. တင့်တယ်ဘဝက2(သတ္တုတွင်း) 9. အိပ်မပျော်ပေ. အန်ဒီ Mineo 10. တစ်ခုခုနယူး 11. လာဇရုကိုပေ. This'l 12. အားလုံးချစ်ပေ. နာတာလီ Lauren 13. ငါ Gone ရယ် 14. ချိုမြိန်အောင်ပွဲခံပေ. Dmitri McDowell နှင့်လအောစမစ်
ချိတ်: (Dmitri) ငါသည်ငါ့ဦးရစ်သရဖူငါအားနည်းနေပါလိမ့်မယ်ရှိရာ၌ဆူးပင်ကိုခံစားရပေမယ့်ငါအရုဏ်တက်သည့်တိုင်အောင်မြေမှုန့်ထဲကနေအသကျရှငျရယ် yeah ငါချိုမြိန်အောင်ပွဲခံဘယ်သူမှငါ့ထံမှငါလေချိုမြိန်အောင်ပွဲအကြောင်းကြောင့်ယူနိုင်ပါသည်တယ်အကြောင်းမရှိရှင်သန်လိမ့်မယ်, ချိုမြိန်အောင်ပွဲ yeah အခနျးငယျ 1: သငျသညျအကြှနျုပျကို limping မြင် , ငါသည်သင်တို့ကိုအကြှနျုပျသငျသညျဤအ CD များအပေါ်မပြောနိုင် limping တွေ့မြင်သိ, ဒါပေမဲ့ bro ငါသည်ငါ့အားနည်းခြင်းအဖြစ်၌ wading တာပါနက်ရှိုင်းသောအထဲတွင်ဒူးရယ်, ထိုသူသည်ငါဒါကြောင့် "စောင့်ရှောက်နှင့်ငါ့ကိုလက်လွတ်ငါငါ၏ကိုယ်ခုနစ်နှစ်အဘို့အညာဘက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်မဟုတ်မျက်ရည်နီးစပ်တာကဤလိုင်းများကိုရေးသားတောင်မှကြောင့်အမျက်သိုနေကြဘူးဆိုငါ့သှားတဆင့်မုသာစကားကိုခံရချင်ပါတယ်ငါ့ကိုမှီခိုလုပ် သင့်ရဲ့မေးစေ့အထိငါနှစ်ဆယ်ခြောက်တယ် "Bruh ပြုံးဖို့ကြိုးစား, ငါတစ်မိုင်အားဖြင့်ပိုကောင်းခံစားရသင့်တယ်ငါစစ်မှန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်အဘို့အclichéအပေါ်လွန်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးသင့်ရဲ့သို့ရာတွင်နှင့်ချစ်စရာကိုးကား Keep, သူလည်းအနှော Hook Post ကို Hook င်: ရှငျဘုရငျမှ Toast, မျက်နှာကျက်မှသောင်းသောင်းဖျဖျကောင်းသော Feeling ကျွန်တော်တို့သင်တို့သည်ငါ့ကိုအကြား finish ကိုချိုမြိန်အောင်ပွဲဖို့ကလုပ် '' gon, holla သငျသညျအကြှနျုပျကိုခံစားရမယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ဆဲကျွန်တော်တို့အနိုင်ရကျွန်တော်တို့ချိုမြိန်အောင်ပွဲအကြောင်း limping ပင်သော်လည်းအပြေး, yeah သငျသညျကြှနျုပျတို့ winded သော်လည်းအနိုင်ရသိ ...
လင်္ကာ 1: ဒါဟာသင်တစ်ဦးယခုအချိန်တွင်တယ်ဘူး, ငါ့စိတ်ထဲပေါ်ရာတစ်ခုခုရဲ့? Soapbox swag, ကိုယ့်ငါသည်ဤချည်နှောင်ခဲ့ပေါ်မှာတယ်ငါငြီးငွေ့တယ် (မော်တော်ကားဆူညံသံ) ငါသည်သင်တို့ကိုဤအတာယာလမ်းကိုဆင်း Screeching ပွတ်နယ်နားထောငျတျောသိ, ကိုယ်ရောစိတ်ပါငါသည်ငါ့လွတ်မြောက်ကြံစည်ရှားရ, ငါကျွန်ခံခဲ့အကြောင်းရင်းငါသည်သူ၏မရိုးသားသောမုသာကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်လွတ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ပေမယ် Get em မြင့်မားအရည်အချင်းပြည့်မဟုတ်ခဲ့ကြဘူး '' သောနေ့ရက်ကာလကိုဒီထင်, မြင့်မားသော em ရ, ငါ့ကိုယ်ထဲမှာ em မြင့်မား Novacane ရ, ငါသူတို့ကငါငန်တယ်, သူတို့ဝေဖန်နိုငျကွောငျးပွောဆိုမုသာကိုခံစားသည်မဟုတ်သို့သော်ငါသတ်ဘို့ဆုတောငျးလတာမျှ, သငျသညျညည်းတွားမြည်တမ်းခြင်းမပြုမီကသူ့ကှယျလှနျခွငျးအဘို့အမစောင့်နိုင်, ငါကိုငါအရှုံးသမားလူစီဖာရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းပြောနေတာသွားပြီပေါ့လူကိုပြောပြ, ငါသီခငျြးထဲမှာတက်ကိုချိုးဖျက်မယ်ဆိုရင်သင်တို့သည်ငါဖုန်းပေါ်တက်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ စုပေါင်း. သည်မသိသူမမှားသိမှား? ချိတ်: ငါသည်သင်တို့ကိုတကားဟုအဘယျသို့နားထောငျတျော, ငါမူကားသင်ရုံမုသာစကားကိုခံရအကြောင်းရင်း '' သင်မယုံကြည်ကြဘူး, ငါအသစ်တစ်ခုသခင်ရတယ်သင်မလိုအပ်ပါဘူး, ငါသည်သင်တို့ကိုမမွငျပါဘူးသိသို့သော်လည်းငါသည်လက်ျာသငျသညျကတဆင့်ကြည့်ရှု, ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုစွန့်ခွာရမှာဖြစ်ပါတယ် (2X ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ) လင်္ကာ 2: အကြိမ်မည်မျှငါကိုပြောပြပါရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြဘူး ...
မိတ်ဆက်ခြင်း: (နာတာလီ) ငါသည်သင်တို့မြင်သောအရာကိုကဲ့သို့သင်တို့ Do သငျသညျကိုကြည့်ကြည့်ပါ? မနက်ငါတစ်ခုတည်း? ကောင်းစွာ, sorta kinda ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသငျသညျစိတျထဲမှာရှိခဲ့အဘယျသို့? သင်၏မျက်နှာကိုသင်ဘယ်သူမှပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်သည်မဟုတ်ယနေ့ညဟုတ်ပဲစကားလုံးဟုပြောနှင့်သင်ညာဒီမှာလေကိုကြည့်သည်အခြားဘယ်သူမှပတ်ပတ်လည်သည်မဟုတ်ငါသည်သင်တို့ရှိသမျှကိုအချိန်မြင်ရထိုအခါငါကုမ္ပဏီသင်သည်မစောင့်နိုင်အကျွမ်းတဝင်ကြည့်, အခုအချိန်မှာအခနျးငယျ 1: ဂျေးအထီးကျန်ခဲ့ပြီးတော့သူတစ်ဦးသည်လူလိုအပ်ချက်တွေရှိပါတယ်ပိုက်ကွန်အပေါ်မေတ္တာသည်ရှာနေင်, သငျသညျအဘယျသို့မျှော်လင့်ထား? သူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့စာမျက်နှာများမှတဆင့်ကြည့်ရှုတော်မူသူမ၏ယောက်ျားသည်ကိုတွေ့သောအခါသူတို့ကခဲယဉ်းရိုက်နှက်သူ၏နှလုံးတွေ့သောအခါသူမသည် kinda အလင်းခွငျးခံရသညျ့ပထမဆုံးမျက်မှောက်မှာမေတ္တာတော်အကြောင်းသူသည်မိမိအသက်တော်ကိုဆုံးရှုံး, သူကသူတို့ကိုသူတို့ဒီခဲယဉ်းသငျသညျထိတဲ့အခါရှည်လျားအကွာအဝေးရဲ့ခံစားခကျြကိုမတိုက်နိုင်သကြိုက်တယ်မျက်စိနှင့်တူ, ဒါကြောင့်သူကအွန်လိုင်းသူမ၏နှင့်အတူသူကအလုပ်မှာရဲ့လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမိန်းကလေးကသူ့စိတ်ထဲပေါ်သူကသူမ၏ကြည့်ဖို့မစောင့်နိုင်သူအပေါင်းတို့ကိုအချိန်င်, သူတို့အတူတူသူကသူ့ homies သူ့ကိုသတိပေးခဲ့သည်ဗီဇာနှင့်အတူလစာရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထဲမထားပါဘူးတဲ့အခါမှာသူမသူတို့ကို features တွေကန်ပြီးတယ် "မိနျးမသင်ဖြည့်စွက်နိုင်သောနှေးကွေး" ဒါပေမယ့်သူကသူမကိုမေတ္တာစိတ်ဂိမ်းရဲ့ ...
လမ်း 11: လာဇရုကို
လင်္ကာ 1: ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုငါအရမ်းရှည်လွန်းငါ့ကိုမြင်ဖို့ကြိုးစားနေပြောနေတာလူတိုင်း yawning တာပါဘို့အိပျပျြောခဲ့သင်္ချိုင်းတွင်းကောင်းသောနံနက်ထုတ် hopped, သူအသက်ရှုဘယ်လိုလိုပဲမယုံ? သူသည်သင်တို့တျောသညျအဘယျသို့ခြောက်ပေနက်သော Boy ခဲ့သည်? သေယောက်ျား holla မဟုတ်လုပ်နိုင်သင်၏နှုတ်ကိုပိတျထားတက် Hold, သင်သည်အဘယ်သို့ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းပြောနေတာ? '' ကထွက်လမ်းလျှောက်မဟုတ်ကြောင်းတံခါးကိုမှတဆင့်တစ်ကြိမ်စေအကြှနျုပျမူကား, ငါ့ခေါင်းကာလ၌ပြန်သငျသညျကိုယူပါစေယခု Ooh ငါရှည်လျားလွန်းကျွန်မငိုသံပြည်သူ့ကျိန်ဆိုများအတွက်သင်္ချိုင်းတွင်း၌ဖြစ်လေထုအကြောင်းထဲမှာအနံ့သိပျောက်ဆုံးတာပါ, နာရေးကျွောငွာငါ့မျက်နှာဖြူဖပ်ဖြူရောကျမ်းစာ၌ရေးထားခဲ့တာ, သူတို့ကခေါင်းတလားကိုပိတ်ရန်ထမြောက်တော်မူခံရဖို့အကြောင်းသင်၏အကောင်လေးမပြောနိုင်, တရားဟောဆရာမခေါ်, သူဒါကြောင့်ကျော်ဘယ်သူမှသူ့ကိုမရောက်ရှိနိုင်မယ့်သွားပြီ, ဤမျှကာလပတ်လုံးပွောဆိုသျောလညျးအပေါ်ကိုင်, သငျသညျကွှေးကျွောကွနှင့်ထွက်ပြေးရှေ့၌ငါတစ်စုံတစ်ယောက်လာမယ့်ကြားသိ, အော်ဟစ်တစ်ခုခုဟုဆို, "ထွက်လာသည်" pre-Hook: သင်္ချိုင်းတွင်းထဲကတက် Hopped, ငါရှည်လျားလွန်းငါသူတို့ကအနက်ရောင်ဝတ်စုံ၌ငါ့ကိုသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံ yawning တာပါဘို့အိပျပျြောခဲ့နံနက်ကောင်းသော, အနက်ရောင်လည်စည်းငါအသကျရှငျတာနဲ့ကျွန်မ Hook အပေါ်ယခု မှစ. ဒီတော့ပျံသန်းရှာဖွေနေနိုး: သငျသညျ မှစ. လာဇရုကိုအကြှနျုပျချေါဆိုနိုငျအပေါ်ယခု မှစ. သင်ယခု မှစ. လာဇရုကိုအကြှနျုပျခေါ်နိုင်ပါတယ် ...
လမ်း 10: တစ်ခုခုနယူး
မိတ်ဆက်ခြင်း / နမူနာ: လုယက်သည်, ငါ့ကိုအခြားတယောက်ပေါ့စို့တက်ကိုင် (4X ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ) လင်္ကာ: သငျသညျသူတို့ကိုငါ J ရဲ့လေသိကောင်လေးတစ်ယောက်, ထိုတပ်ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအကြှနျုပျ၏ခွကေိုမှာသူတို့ကိုကျောက်, ငါ၏အဗီရိုကိုသင်သူတို့ကိုငါ5ရဲ့တယ်ငါပဲသူတို့ကို 12 ရဲ့လေသိဖြည့်စွက်သည်မဟုတ်သို့သော်သင်သည်ငါတကယ်ချင်တယ်သူတို့ကို 1 ရဲ့သိ site ပေါ်တွင်ဒီတော့စုံတွဲတစ်တွဲကိုပိုကလစ်နှိပ်လိုက်ရောင်းချခြင်းအပေါ်ဖြစ်ပါသည်, ငါလူတိုင်းသူတို့ကိုတယ် အကယ်. အစားသူ Mike ငါ့အစွဲငါလူတိုင်းဘာတစ်ခုမှငါ့ကိုကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်အခုကြိုက်အဘယျသို့မဟုတျကွောငျး homie အမျိုးသမီးတွေဒါမှမဟုတ်အရက်များ Sneakerheads အမည်မသိမဟုတ်ပါဘူးတင်းကျပ်စွာငါ၏အ Sneaker ဂိမ်းစောင့်ရှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရုံညာဘက် Bruh feeling တာပါမှီတိုငျအောငျ, ငါသည်ငါ့ကတ်ကိုအပေါ်ကိုတင်အချို့ဖိနပ်အဘို့အ itching တာပါ, ငါကိုငါတကတယ်ငါကအသစ်စွဲတယ်တချို့ kinda တုပ်ကွေးအကြောင်းတယ်ထင်ကငါပြုမည်မဟုတ်ရတယ်အဘယျသို့အသစ်တစ်ခုခုကို wan't အကြောင်းသက်သေပြဖို့ကဘာလဲဆိုတာသောအရာကိုအံ့ဩခြင်းတခါတရံမှာဆုံးရှုံးဖို့ဘာမျှမတယ်သည်မဟုတ် ငါ့ကို Outro / နမူနာတူ: တက် Hold တူ yeah ငါ့တယ်, ငါ့ကိုအခြားတယောက်ပေါ့စို့တက်ကိုင် (4X ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ)
လမ်း 9: အိပ်မပျော်
လင်္ကာ 1: ငါဒီအကြှနျုပျ၏သာအားလုံးယခုဘဝငါ Yessir ယခုတစ်မိနစ်စောင့်ဆိုင်း bruh ငါလေအားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးငါကပေးအကြှနျုပျ၏ဘဝငါထွက်သွားလျှင်ယနေ့ညငါထိပ်ပေါ်မှာထွက်တာပါငါ့နှလုံးရပ်တန့်အင်းယနေ့အဆုံးသတ်နိုင်ပစ်ခတ်ယနေ့အတွက်မယ် ချွတ်ယူ y'all သင်တို့လက်နှင့်အတူစည်းချက်အဘို့အမြင့်မားစောငျ့အဖျားခတ်ကြည့်ရှု, 808ငါသောအခါစည်းချက်တစ်စက်တုန်လှုပ် gon အဆိုပါမြေပြင်အနားမှာရပ်နေကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်များပွောဆိုအိုအသက်ရှူတာသည့်အခါ standby အပေါ် 's, အပြတ်အသတ်အကြှနျုပျ၏ leash ငါ့ကိုပယ်ကြကုန်အံ့ကျေးဇူးပြုပြီးငါခံစားရ, ငါကခံစားမိ, ငါပါးပျဉ်းအတွက်အမှန်တကယ်ဖွင့်သူတစ်ဦးဂေါ်ရီလိုပဲတိရစ္ဆာန်တာလိုပဲဒါနဲ့သွားပေါ့ငါပျောက်ထခြင်းနှင့်ကြိတ်ရယ်သောအခါအပေါ်ငါအနားယူပါလိမ့်မယ်လွန်းကောင်းသော feeling တာပါငါ Bruh အပေါ်တာအဘယ်သို့သောအဘယျကွောငျ့အဖွင့်ကြောင်း ငါသည်နံနက်အချိန်၌နိုးမထားဘူးဆိုရင်ငါ့သကျတမျးတူချွတ်မယ်ယနေ့ညရုံညဉ့်လုံးကြာသီချင်းကိုရေးသားခဲ့သည်, ငါလေတိုက်မှပွင်ပစ်သတိဖြစ် gon တာပါ bruh အဘယ်သူမျှမချနှေးကွေးသွားရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းကြှနျုပျတို့သညျသှားကွပါစို့, ကျွန်တော်တို့ကဆင်းဘယ်သူမျှမကလျှော့ချအနိုင်ရ gon, ငါတို့သည်သူ့ကိုအဝါကွှား Pre-ချိတ်သိ: ယနေ့ညငါကအားလုံးအတိုင်းလိုက်နာငါ့ဘဝ၏ရဲ့တူအသက်ရှင်ရန်အန္တာရာယ်ပါလိမ့်မယ် ...
လမ်း 8: တင့်တယ်ဘဝက2(သတ္တုတွင်း)
မိတ်ဆက်ခြင်း: အိုး, မင်းကိုချစ်တယ်, yeah မရှိအခြားလိုပဲ, ငါသည်သင်တို့ကိုပြုံးကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ yeah သင်ရုံနွေရာသီတူထွန်းလင်း, yeah အခနျးငယျ 1: သင်သည်ထိုသူတို့စကားသည်ပျက်ကွက်သည့်အခါခံစားမှုကြောင့်ငါသည်ငါ့ mini ကိုရန်ပြောပြပါကဘာလဲဆိုတာအဘယျသို့ verbalize ရန်ခက်ခဲကြောင်းသိ, ငါ၏အနညျးငယျလူကိုကလေးဆွေးနွေးချက်ပြောနေတာခံရမှာ, ငါသည်သင်တို့ကိုကားဟုခြင်းကိုခံရသောအရာကိုမသိရပါဘူးဒါပေမယ့်ငါမေရိုင်းသောတောင်မြောက်သူတို့ကိုဝါးတားပိုလိုနှင့်ဂျပိန် curly သင်ထားသော်လည်းအနီးရယ်တဲ့အခါသင့်ရဲ့ဖေဖေမှ Boom bap သော်လည်းငါ့နားမှဂီတရဲ့, သငျသညျသူတို့အပျေါမှာရောထွေးဆိ swag လမျးဖွောငျ့ငါမျက်ရည်သင်တစ်ဦးပြုံးစောင့်ရှောက် ထိုအချိန်မှစ. ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည်မဟုတ်မှီတိုငျအောငျသငျသညျအကြှနျုပျဒီတော့ခက်ကိုမှန်ကန်လတ်ဆတ်တဲ့အျောဟစျခဲ့မိဝမ်းထဲကထွက်သင့်ရဲ့ mama သူတို့နှင့်ပေါ်တွင်သင်၏အဖေတူလိုက်ရှာကြောင်းတယ်သော်လည်းသင်တစ်ဦး leer ထက်လက်ကမ်းကြော်ငြာတစ်စောင်ဖြစ် ငါ့မကျြနှာနပန်းနှင့်ကခုန်ပေါ်, အရပျ၌ရိုင်းငါသည်သင်တို့ကိုငါ့နာမကိုလေသိသို့သော်လည်းငါသည်မိမိအကျော်ကြားမှုသည်မိမိလူနေမှုဝတ်ဆင်ထားချင်ကြည့်ပါ, ငါသည်သင်တို့ကို Hook ကိုချစ်: အိုး, ငါသည်သင်တို့ကိုသင်ရုံအကြှနျုပျ၏ရူပါရုံကိုသငျသညျလှပသောနေအကြောင်းရင်းမျှမျှမျှရှင်းလင်းမဖွစျနိုငျနွေရာသီတူထွန်းလင်းပြုံးမြင်သောအခါသင်တို့ကိုငါအဘယ်သူမျှမကအခြားလိုပဲချစ်ကြ, ဒါကြောင့်ငါမနိုင်သငျသညျကိုခစျြတအံ့ဩစရာမရှိဖွင့် ...
နမူနာ: ငါတို့ရှိသမျှသည်ထ အကယ်., yeah oh yeah oh (ပြန်ဆို) လင်္ကာ 1: ငါမိုက် bro တို့ထိဖို့ထိုက်ပါဘူးသိသို့သော်ဤယာဉ်ငါဒီကလောင်တွေနဲ့ဓါတ်ခွဲခန်းနဲ့ကျွန်မနောက်ဆုံးအပြီးသတ်စေခြင်းငှါ, သိမှတ်ကြလော့တစ် pad ပါကဗျာလေးများအဘို့စစ်တိုက်မယ်လို့အရာတစ်ခုခုသည်, ငါ thoughLet ရဲ့ငါတွေ့ဆုံခဲ့ '04 ဖို့အချိန်ပြန်သွားရေးထားဒါကြောင့်တကယ်မဖြစ် 116, လျင်မြန်စွာငါ Fast ရှေ့ဆက်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်လေးနှစ်ခဲ့သည်, ကျွန်တော်တို့ခရီးစဉ်အပေါ်ငါတို့ကသူ store မှာခဲ့ရုံအရာကိုသိသည်မဟုတ်သို့သော်ယခုဤနေရာတွင်ကျွန်တော်ဆယ်နှစ်အကြာတွင်များမှာ, စီးဆင်းမှု သာ. ကြီးမြတ်ခြင်းပိုမိုနီးကပ်စွာတယ်တယ်, ပေါင်းကကျွန်တော့်ကိုမုန့်စိမ်းထိုသို့ပြုပါဟုပိုပြီးမုန်းင်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကျနော်တို့ကိုသူဒါမသနားတျောမူသည်ကိုငါကလုပျအဘယ်ကြောင့်သူတို့သညျငါ့ကိုမေးမြန်းလျှင်ငါကအင်းငါဒါကဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ငါ၏အ unashamed အမှုထမ်းများအတွက်စကားပြောတာပါတဲ့လှုပ်ရှားမှု၏ဂီတရဲ့ကသူတို့ကိုပြောပြစီးဆင်းမှုနှင့်အတူအစေခံ '' သခင်ဘုရားစေကျွန်တော်တို့ကိုချိုးဖျက်မည်မဟုတ် အကြို Hook ထနေတဲ့စင်မြင့်မထိပေမယ့်သူတို့ကသူ့ newness အတွက်လမ်းလျှောက်နေတာပါ: ကျွန်တော့်အိပ်မက်ဖြစ်လိမ့် upThat အားလုံးမြင့်တက်ငါတို့ရှိသမျှသည်ထထိုအခါရှင်ဘုရင်အကြောင်းရင်းတစ်ခုရပ်နေအိုပေးသူ yeah အိုးကောင်းသောင်သင့်တယ်လိုလျှင်, yeah အိုး yeah oh,...
မိတ်ဆက်ခြင်း / နမူနာ: တချို့ကကျထကျငါကယခုအထိအကယ်စင်စစ်ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်ကရုဏာအမြဲအတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ဘယ်တော့မှမပျက်ပြယ်ပြန်လာကြလိမ့်မည်ပုံရသည်ဒီတော့နီးစပ်အခြို့ရက်ပတ်လုံးခံစားမိ, oh ဟာလေလုယအမြင့်ဆုံးကိုခြီးမှမျးဖြစ်ခြင်းရှိသမျှတို့ကိုငါငါ့နေ့ရက်ပဲအားလုံးငါ့အသက်ကိုငါတိုင်းစကားလုံးဆိုလိုကြောင်းသဘောဆောငျမျှော်လင့်ဝမ်းမြောက်စွာသင်ဖို့ကပေးလိမ့်မယ်, ooh တောင်မှငါ့ကိုယေရှုနှင့်အတူဘေးဥပဒ်နှင့်, အိုးသညျယရှေု, အကြှနျုပျ၏ယရှေုသညျ, ငါဒါအခနျးငယျသငျသညျကိုခစျြအဘယျကွောငျ့ဖွင့် 1: ငါသည်ငါ့ရွေးကောက်ပွဲသေချာစေရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းဓားတာပါတူကောင်လေးတစ်ယောက်ကျွန်မခံစားရပါတယ်, အိုဘားမားဘိုင်ဒန် (နားလည်ပါတယ်?) နေ့စဉ်နေ့တိုင်းငါအတွင်း၌လူကြမ်း Killing homiciding တာပါ, တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိုသို့ traumatizing င် (ဒါကြောင့်မဖြစ်?) သို့သော်ထိုသို့ငါဂတိတော်ကိုစီးနင်းတာကသူ့စကားလုံးမှတွယ်ကပ်သောအခါငါထိတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့လိုက်နာမဟုတ်ပါဘူးသောအခါငါကရင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ကတိပေးငါ့ကိုဝမ်းမြောက်စေ၏ဒါကအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး BRO, ငါမူကားထိုသူ၌ပြောရလျှင်ရယ်: ငါသူတို့ကအရိပ်နဲ့ပေါက်တပေါက်တစ်ပေါက်တယ်နဲ့တူငါစိတ်ပုန်းအောင်းအတွက်ရယ်, ဒါပေမယ့်ငါမျက်စိပွင့်လင်းနှင့်အတူအိပ်မက်တာပါတူငါသားတော်စိတ်သိအကြောင်းမရှိဖိုင်တွေကိုတာပါ, အကြှနျုပျ၏စိတျမိုဃ်းကောင်းကင်မြင့်တက်နေဖြင့်ဓား floating, မိုဃ်းတိမ်ကို9ကြောင်းကိုအိုဇုန်းလွှာအလွှာဟေ့ငါကိုရေမစိမ်တာ၌ငါ့သမုဒ္ဒရာရေကူးင်သို့သော်လည်းငါသည်ဆေးလိပ်မနိုင်သလားပေါ့နောက်ကွယ်မှသူသည်ငါ၏အောက်မှာမီးထ lit ...
လမ်း 4: က Manolo
ချိတ်: ငါ ammo သော့ခတ်ရရှိခဲ့သောအလှည့်တက်ဘို့ထိုသို့ပြုနဲ့ကျွန်မတစ်ဦးစာမျက်နှာ Flip မရှိ burner အကြောင်းပြောနေတာသည်မဟုတ် loaded, ငါကက Manolo အတွက်အခန်းတယ်ပေါက်ကွဲမယ် (nolo) က Manolo (nolo) က Manolo (nolo) က Manolo (2X ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ) လင်္ကာ 1 (ခရီးစဉ်ကို): သူတို့ကအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားသောငါသည်ငါ့ကားထဲတွင်တဦးတည်းကိုစောင့်ရှောက်နဲ့ကျွန်မအိမ်မှာနှစ်ဦးတယ်အကြောင်းငါတယောက်တည်းစားခွက်ထားခဲ့ဘယ်တော့မှသူတို့ကိုယောက်ျားလေးများအားပြောပြရန်ကြိုးစားနေ, ဒါပေမဲ့သူတို့တူညီသောအရာနှစ်ချက်အစွန်းပြုပါ, နှစ်ဆစည်, ငါကဒီမှာနဂါး facing ထွက်တာပေါက်ကွဲသံကြီး bang, ငါသူတို့သည်ငါ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုအလာမယ့်စိတ်ထဲကအမက, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသူတို့ငါ့ကိုသတ်ဖို့ကြိုးစားနေတည်ရှိသည်သောအခြိနျကာလကိုရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းင်, သငျသညျအကြှနျုပျကိုမယုံကြည်ကြပါလျှင်ငါဂရုမစိုက်ပါဘူး, ငါဂရုမစိုက်ပါဘူး, ငါလွယ်ကူသောငါစာမျက်နှာကိုလှန်ကြည့်တာပါဒါကြောင့် ယူ. မသွားနိုင်, ငါသည်တဗီဒီယိုကလစ်ကနှိပ်တစ် gauge ခလုတ်-ပျော်ပါတယ်, စင်မြင့်နှိပ်သည်သမ္မာတရားနှင့်တကွသင် Hit, ၎င်း၏တိုင်းထားသောစာပိုဒ်တိုများအတွက်သူကငါရေငုပ်တယ်နက်ရှိုင်းသောအကြှနျုပျကိုဖြတ်, ငါကမီးမီးရတယ်စီးသည့်အခါများတွင်ရေငုပ်တယ်, တဖန်ငါအခနျးငယျငါးမျှားအသက်ရှင်လျက်ရယ်2(Lecrae): က Manolo က Manolo, ငါကဒီမှာငါ့အမိတ်ဖက်ငါကပျောက်ဆုံးထင်စာတိုက်သွားထုတ်တာ, ငါ၏အ mama ငါသော်လည်းအနီးကပ်ငါ၏အသေနတ်သမားစောင့်ရှောက် Loco ပေါ့စဉ်းစား, သင်ကအပြည့်အဝဖွင်သိ ...
ချိတ်: သငျသညျဝံ့လျှင်သင် Godman အပေါ်အဲဒီမှာဝါကြွားလိုလျှင်လေထုထဲတွင်လက်ရပ်တည်ချက်အတွက်အနည်းငယ်ဆူညံသံ Make သူတို့ကို Get, သင်က tags များနှင့်အတူအဝတ်ကိုရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်း '' မဟုတ်ခဲ့ဝါကွှားသညျ့အခါဒါကအဘယျသို့လျှင် shweet ခံရချင်ပါတယ်ဝံ့သာလြှငျ? သင်တို့ကိုဝါကွှားသညျ့အခါကပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးင်သောသူကိုရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းကားအဘယျလျှင် shweet ခံရချင်ပါတယ်? ဒါက Post ကို Hook shweet ခံရချင်ပါတယ်: ငါသည်သူတို့ကိုသူတို့ပူလူကိုတခြားတစ်ယောက်ကတူပြောနေတာကြားသိသူတို့ကိုတက် gassed တယ်, ကကထုတ်တဲ့မျှော်အပေါ်ငါသူတို့တစ်ထီးရပိုကောင်း သာ. ကောင်း၏မကသူတို့ကိုပြောပြရန်ကိုမုန်း, ဘုရားသခငျသညျအခနျးငယျစိုးစံ 1: ရဲ့နှောင်းပိုင်းရှစ်ဆယ် D ကိုမြို့ဖို့အချိန်ပြန်သွားကြကုန်အံ့ငါ့ကိုဆင်းကိုင်, အဲဒီမှာနောက်ကျောရယ်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ငါ့ကိုဖန်ဆင်းရှိရာင်, ငါ vaca-့ရာတွင်မဖြစ် (vacationing) ငါအိမ်ပြန်တာနဲ့တူခံစားရ, တည်းခိုစဉ်းစား, Ooh ပြီးသားပြီးသား Lone ကြယ်ပြည်နယ်ရပ်ကြီးသော်လည်းငါတည်းခိုသည်မဟုတ်, ဘယ်လိုကိုယ်ကမေ့လျော့တော်သို့သော်လည်းငါသည်ဒါဟာသူသည်ငါ့ကိုဖုံးအုပျပုံကိုပျံသန်းမယ့်အပြာရောင်ထဲကတက် pop မဟုတ်ပါဘူးနိုင်, ငါဖိနပ်ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းပြောနေတာသည်မဟုတ်, အစို့ငါပြဿနာတွေအများကြီးရတယ်ဒါပေမယ့်ငါဖြောင့်တယ်, ငါအကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျအိုင်၌သူတို့ကိုဆမ်းလိမ့်မည်ကိုသိ shweet င်, ငါဆိုသညျကားရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြိမ်မည်မျှ shweet ရဲ့ ...
လမ်း 2: တွင်အလင်းအိမ်
မိတ်ဆက်ခြင်း / နမူနာပါအိုး, အလင်းကိုကျနော်တို့သွားဘယ်မှာမသိရပါဘူး (ပြန်ဆို) လင်္ကာ 1: ဒါကြောင့်အားလုံးမှောင်မိုက်ရဲ့ပတ်ပတ်လည်ကြည့်ရှုလော့, ထိုသန်းသည်လူချီတက်လိုပဲအားလုံးအနက်ရောင်အရာအားလုံးကို, ငါမူကားအရာခပ်သိမ်းအမှောင်စိတ်နှလုံးကိုရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းပြောနေတာ, မှောင်မိုက်စီးဆင်းမှုရေးသားခြင်းမှောင်မိုက်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအမှောင်စိတ်ထဲတွင်ကျွန်မသော်လည်းအနည်းငယ်အလင်းရနိုင်? အရာတစ်ခုခုကိုငါအဘို့အတိုက်ခြင်းနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ? ဟေ့ကျနော်တို့ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်အပြည့်အဝအမြန်နှုန်းကို သွား. သွားသောအဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွင်မသိရပါဘူးမျက်စိကန်း, ပျံသန်းငါတို့မူကားအနိမ့်သို့သျောကြှနျုပျတို့သူ store မှာတယ်ပဲဆိုတာသိကြပါဘူး, Nope အ okie doke ဘို့ကျဆင်းမပို, ကအလင်းမှီတိုငျအောငျရဲရ '' မီကသူကျွန်တော်တို့ကိုမမြင်ရသောအရာများအတွက်မျက်မှောက်ပေးနိုင်ပါသည်, ကျနော်တို့သွားဘယ်မှာမသိရပါဘူးဒါပေမယ့်အသက်အဘို့အဘယ်သူမျှမမှာ google မြေပုံမဟုတ်ပါဘူး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မီးကျိုးတူနှင့်ကသက်သေပြချက်င်: ကျွန်တော်တို့လျှပ်တစ်ပြက်, အချို့သောနီကယ်နှင့်ကြေးနီများအတွက်ရွှေရဲ့အချို့သောဘဏ္ဍာကိုအပေါ်ဖြတ်သန်း, ခိုးယူရဲ့ဘုန်းအသရေရဖို့ကြိုးစားနေငါတို့ဟေ့ငါတို့ရှိသမျှသည်အအိပ်မက်တယ်မျိုးစေ့ကိုကြဲသောအရာကိုရိတ်, ငါသူက switch ကိုနှင့်ထွန်းလင်းလှန်ပါလိမ့်မယ်ကြောင်းဆုတောငျးလကျြတာပါငါ့ဥစ္စာဖြစ်၏, ကလေးတွေကိုကျနော်တို့သင်ကတယ်သိမျက်စိကန်း, သခင်ဘုရားအကြှနျုပျတို့သညျကသာလျှင်သင်ပိုမိုမြင့်မားကျွန်တော်တို့ကိုယူနိုင်ပါသည်တယ်သိ, သင်လေယာဉ်မှူးကအလင်းများကျနော်တို့ချိတ်ကျေးဇူးပြုပြီး ...
လမ်း 1: တက်
ချိတ်: ဒီနေ့ငါတို့ရှိသမျှသည်အကြှနျုပျ၏ကြောကျဆူးဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကိုမီးရှို့မုသာစကားကိုဆန့်ကျင်ရပ်နေ, ယခုငါထသွားကြဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ, ငါ့အတောင်ပံတွေ့အတူတကွငါ့ကိုအသကျရှငျလာစောင့်ကြည့်သွားပြီရဲ့မထကြသောအခါနေ့ကိုဖွင့်, ငါတို့ရှိသမျှသည်မြင့်တက်လာ oh အိုးအိုးငါတို့ရှိသမျှသည် oh oh အိုးယနေ့နေ့အထအခနျးငယျမထ 1: ငါ em မှာရူးသွပ်တာပါတူငါသည်ဤအပုဒ်အပေါ်ဝါကြွားဖို့နောက်ကျောရယ်တက် Hold, ရိုက်ပုတ် MICS သင်သည်နှစ်ကြိမ်ဒီမှာရယ်ငါ့ကိုမေးမြန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်သည်မဟုတ်မှန်တက် Listen ငါဖောင်းပွတာ left ဘယ်တော့မှဆိုတဲ့အချက်ကိုစိတ်ထဲစိတ်ထဲဘယ်တော့မှမ back စေခြင်းငှါ,, အကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျသညျအဘယ်သူမျှမလူထုပုံပြင်များမဟုတ်ပါကအဘို့အသွားကိုယ့်ရှေးရှေး I'ma ဆိုးဆိုးရွားရွားဟောက်တတ်တဲ့စဉ်တွင်ငါလူသိများတာပါကဲ့သို့သူ့ကိုအပေါ်ဝါကွှားရန်ဒီနေရာကိုရယ်, '' သူကအကြောင်းရင်းအစစ်အမှန်, သူအမှန်တကယ်အခုတော့ခေါင်းစဉ်မှလက်မှာငါဒီဇိုင်နာသိ, သူကငါသည်ဤဘဝကျွန်တော်ထရပ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြရန်တစ် cryer လိုအပ်သည့်အခါ I'ma အနားယူဘယ်လိုဒယ်အိုးထဲမှာတစ်ဦးကို flash ဖြစ်ပါတယ်ငျသညျပွောပွဖို့ရေးသားတာပါမိမိလက်နှင့်ဒီဇိုင်းမိုဃ်းတိမ်၌ဖွင့်ပျံတက်တဲ့သူလေယာဉ်မှူးထက်ပိုမိုမြင့်မားင်? yo အစီအစဉ်များအကြှနျုပျ၏ dude Check, သငျသညျသူတို့ပြောအားလုံးသည်သင်တို့၏ကျောက်တုံးအပေါ်ရက်စွဲတစ်ခုနှင့်အတူနက်ရှိုင်းသောခြောက်လရှည်လျားလွန်းမြေအောက်လမ်းဖြစ်အကြောင်းကြောင်းသင်ျခြိုငျးသငျ့အိမျမက,...
မှထုတ်လုပ်သည်: Gawvi နောက်ထပ်အသံအားဖြင့်: J ကို. ပေါလုကအနုပညာလက်ရာအားဖြင့်: အဲလက်စ်မက်ဒီနာ Mixed ကကျွမ်းကျင်: ယာကုပ်အမျိုးကို "စီးပွားရေးဆိုင်ရာ" မောရစ်အခနျးငယျ 1: ဘယ်သူမှဘာတစ်ခုမှငါမှတ်ချက်များတွိသူတို့ကိုတဆင့်ကိုလှန်ကြည့်တာပါသောအခါငါခံစားတာကိုဘယ်လိုဖွင့်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့နာကျင်မှုနားထောငျတျောမမူပါနှင့်, ငါခံစားမိအားလုံးကအဲဒီပစ္စည်းပစ္စယကိုနောက်တဖန်မတည်ရှိပါဘူးဟောင်းရဲ့ကျော်မိုးရွာရွာသူတို့ကငါ့ကိုပြောပြရသည်သို့သော်လည်းငါသည်ဤအလမ်းများတို့၌ကြည့်ရှုသောအခါ coulda Hook ငါ့ကိုဖြစ်တူငါခံစားမိသောအခါစစ်မှန်သောင်ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့မြည်ကြပါဘူး: လူသားကိုငါငါသည်သူတို့မအခုအချိန်မှာခံစားတာပါဘယ်လိုသိကဘာလဲဆိုတာဩက coulda သငျသညျကိစ္စအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုသိငါတို့ရှိသမျှသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖန်ဆင်းငါ့ကိုဖြစ်လို coulda ငါခံစားမိခဲ့တူငါခံစားမိအခုအချိန်မှာခံစားတာပါသင်မည်သို့ပြောနိုင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရူပါရုံကိုကျနော်တို့က coulda အခနျးငယျငါ့ကိုဖြစ်တူငါခံစားမိငါသိကြပါဘူးဒါပေမယ့် coulda ငါ့ကိုဖြစ်အပြစ်မဲ့ရဲ့အဘယ်သူသည်ရှေ့တော်၌ကဒီမှာဖြစ်နာကျင်မှုအကြောင်းမရှိခံစားရပါတယ်ဘိုင်ပြတ်သည် 2: ငါ Sean ဘဲလ်မသိမိုက်ဘရောင်းကငါ Trayvon သိသည်မဟုတ်မသိခဲ့ပါဒါပေမယ့်ငါအဲရစ်ဂါနာနဲ့ရောမသိခဲ့ပါကွယ်ပျောက်ကြပြီငါအော်စကာ Grant ကသို့မဟုတ် Tamir ဆန်စပါးသိသည်မဟုတ်သိသို့သော်လည်းငါသည်သူတို့ဘဝကပိုတန်ဖိုးရှိ Is သိ သူတို့ထက် ...
အကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးသလေးလံသောဖြစ်ပါသည်. ငါသည်ဘုရားသခင်၏ကောင်းသောသိ, သူထိန်းချုပ်ရဲ့, ဒါပေမယ့်ငါ့နှလုံးလေးလံသောဖြစ်ပါသည်. ဖာဂူဆန်အတွက်ဖြစ်ရပ်များအပြီးပြီးခဲ့သည့်အပတ်က (ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဖို့နဲ့တုံ့ပြန်မှု), ငါသီချင်းတစ်ပုဒ်ရေးဖို့ထမ်းခံစားခဲ့ရ. အကြှနျုပျ၏ရည်မှန်းချက်မဆိုကြီးကျယ်သောထုတ်ပြန်ချက်များသို့မဟုတ်ကြေညာချက်များစေရန်မဟုတ်ခဲ့, ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးငါ့ကိုခံစားရဖန်ဆင်းသောလမ်းဖော်ပြ. ဒါနဲ့ရေးသားခြင်းစတင်, နှင့်ဤထွက်လာ၏အဘယ်သို့သောအ. အကြှနျုပျ၏စိတျထဲတှငျထညျ့သှငျးပွောကွားခဲ့သောစိတ်ဓါတ်များခဲ့သည်: "ဒါဟာငါ့ကိုခဲ့ဖူးတဲ့နိုင်ဘူး။ " ငါသည်ခရစ်ယာန်များသည်ဤကဲ့သို့သောကာလ၌တုံ့ပွနျသငျ့ကိုဘယ်လိုအပေါ်တစ်ဖွဲ့လုံး post ကိုအဆင်သင့်ခဲ့, ဒါပေမဲ့အဲရစ်ဂါနာနဲ့ရော ပတ်သက်. သတင်းမနေ့ကပြီးနောက်, ငါနောက်ပိုင်းတွင်စောင့် post ဖို့ဆုံးဖြတ်. အခုအတွက်တော့, ကိုယ့်ငါလေးလံသောနှလုံးရှိသည်ဟုဆိုချင်. ငါအခုဆွေးနွေးငြင်းခုံသို့မဟုတ်အငြင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားမရယ်. ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုငါ့နာကျင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချင်. ကအဲရစ်ဂါနာနဲ့ရောဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ဖို့ကြီးကျယ်သောကွောငျ့ငါနာကျင်တယ်. ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မပထမဦးဆုံး months ago ကစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ, ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအျောဟစျပါ၏. ဘဝကအဆင်းလှသောဆုလက်ဆောင်ဖြစ်ပါသည်, ထိုသို့ဘဝတစ်စုံတစ်ဦး၏ကိုယ်ခန္ဓာချန်မထားစောင့်ကြည့်ဖို့နောကျအရေးကွီးရဲ့ - တခြားလူကိုယူမယ့်အထူးသဖြင့်လာသောအခါ. ငါထင်, "အကယ်စင်စစ်လူမဟုတ်နိုင် ...
အကြှနျုပျ၏အသစ်စာအုပ်, တက်, ဇန်နဝါရီလ 27 ထွက်ကြွလာ! စာအုပ်များရောင်းချနေရာတိုင်းမှာကြောင့်ရရှိနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်. သငျသညျယခုက pre-order နဲ့ Risebook.tv မှာစာအုပ် website ကိုကြည့်ရှုနိုင်. ငါသည်ထာဝရဘုရားတက်ရဖို့ကိုငါ့မျိုးဆက်အားပေးဖို့အသုံးပြုနိုင်သည်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဆုတောင်းပဌနာ. အပေါ်ကနောက်တွဲယာဉ် Watch နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာအုပ်၏အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်ဖတ်: Society ကလူငယ်အပူအပင်ကင်းပြီး Self-စကားရပ်များအတွက်အချိန်ကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်ခရီးစဉ် Lee ကဘုရားသခင့ငိုက်မှထလူတိုင်းကိုခေါ်ပြောပါတယ်, အနိမ့်မျှော်လင့်အထက်, နှင့်ထမြောက်တော်မူဘုရင​​်, အသက်ရှင်ရန်. ကမ္ဘာကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစောပိုင်းနှစ်တာဝန်မဲ့ခံစားခြင်းထက်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝရေးရာမှမြှုပ်နှံခံရဖို့ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားပါသည်. ကျနော်တို့တာဝန်နှင့်ကတိကဝတ်အဖြစ်ကြာမြင့်စွာတတ်နိုင်သမျှပယ်ခံရဖို့ဝန်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်. ဆိုတော့, ကျွန်တော်ဖွင့်မရရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အများစုကဘဝအပေါ် In-အိပ်ပျော်သည်ငိုက်နေတဲ့ဝမ်းနည်းဖွယ်ပြည်နယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်သုံးဖြုန်း. အဆိုပါပြဿနာဘဝပြီးသားစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာအခုဖြစ်ပျက်င်. တဖန်ဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်ဖို့သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီ. ဒီအစွမ်းထက်စာအုပ်ထဲတွင်, ခရီးစဉ် Lee ကကနှိုးထဖို့အချိန်ရဲ့စောဒကတက်သည်, ငါတို့သည်လည်းအသက်ရှင်ရန်ဖန်တီးခဲ့ကြရာလမ်းကိုအသက်ရှင်ရန်. Young ကသို့မဟုတ်ဟောင်း, ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအသက်ရှင်ရန်ခေါ်ခဲ့ကြရတယ်. အခုပဲ. Young ကယုံကြည်သူများကိုရင်ဆိုင်ရ ...
သငျသညျခရီးစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်အဘို့မြင်ကြဖူးတဲ့အနုပညာခံစားခြင်း, တက်? သငျသညျသငျနှငျ့အတူအားလုံးအချိန်ကိုကရှိနိုင်ပါသည်ဒါထိုအခါသင်၏ဖုန်းကိုအဘို့ဤ shweet wallpaper ကိုဖမ်းပြီး. iPhone ကို Wallpaper ကို Download လုပ်
ဆုရရှိသူတူအဘယျသို့ကြည့်ရှုကြပါ? သူတို့အရပ်ရှည်ရှည်သို့မဟုတ်အတို Are? Black ကသို့မဟုတ်အဖြူ? အားကြီးသောသို့မဟုတ်အားနည်း? ငါကကျနော်တို့အားဖြင့်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုအပေါ်မူတည်ခန့်မှန်း "ဆုရှင်ပါ။" ငါသည်တရှည်ရှည်တစ်ဖတ်ပြီးအဖြစ်ကဒီအတိတ်တစ်လတစ်ဆုရှင်၏ဇာတ်လမ်းသို့စို့ခဲ့, မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်၏ပေမယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိ. သူနှင့်အတူလူအတော်များများရဲ့စွဲသူရဲကောင်းကိုးကှယျအပေါ်နယ်စပ်အဘယျကွောငျ့အသေးစိတျအကောငျ့ကိုအကြှနျုပျသတိပေး. အများစုကအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. ပွောနိုငျ "မိမိအ airness" ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှသူတစ်ဦးဆုရှင်မယ့်အစဉ်အဆက်တောင်းဆိုနိုင်. သူသူအပေါင်းချန်ပီယံကွင်းရတယ်မရောက်မီသူတစ်ဦးဆုရှင်တူခဲ့, သော်လည်း? သင်စာအုပ်ဖတ်အဖြစ်, ဒါကြောင့်သူကချန်ပီယံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းသလိုပဲ. တစ်နည်းနည်းလိဂ်အိုးအဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အငယ်တန်း varsity ဘတ်စကက်ဘောကစားသမားအဖြစ်သူ၏ထူးချွန်ကစားခဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်; မိမိအအထက်တန်းကျောင်းတိုးတက်မှုနှုန်း spurt သို့မဟုတ် UNC မှနဲ့သူ့ရဲ့ပထမနှစ်စဉ်အတွင်းသူ့အဂိမ်းအနိုင်ရရိုက်ချက်. ငါသည်တချီကာဂို Bull ကဲ့သို့မိမိချန်ပီယံအကြောင်းကိုအခန်းကြီးမှရရှိခဲ့သောအချိန်အားဖြင့်, အဘယ်သူမျှမအံ့သြဖွယ်များရှိကြ၏. အဆိုပါစာရေးဆရာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုဖန်ဆင်းသောလမ်း၌သူ၏ဇာတ်လမ်းကပြောသည်: ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဦးဆုရှင်ဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်. ထိုကျနော်တို့အဘို့သူ့ကိုသိသောအရာကိုင်: ခြောက်ခုချန်ပီယံကွင်းကိုအနိုင်ရ, ငါး MVPs, နှင့် 14 အားလုံး ...
တစ်စုံတွဲ months ago ငါသည်တအမှတ်တံဆိပ်အသစ်အယ်လ်ဘမ်ကြေညာခြင်းဖြင့်လူတိုင်းအံ့အားသင့်, "ထလော့။" သငျသညျငါ့တံဆိပ်ရှေ့တော်၌အကြောင်းကိုတိတ်ဆိတ်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့်ငါအများပြည်သူသွားလေ၏ဘယ်လောက်ခက်ခဲနားမလည်ကြဘူး. အဆိုပါအယ်လ်ဘမ်ကိုကျော်တစျနှစျအတှကျအကျင့်ကိုကျင့်ခဲ့, ငါကလူတိုင်းကိုပြောပြရန်မစောင့်နိုင် - ငါအသစ်တစ်ခုခုကိုကျဆင်းနေသောအခါတောင်းစောင့်အထူးသဖြင့်သူတို့အား. အဆိုပါတုန့်ပြန်ယခုအထိနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအားတက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်. ငါကလူကိုငါနောက်ဆုံးနှစ်နှစ်တော်တော်လေးတိတ်ဆိတ်ဖူးသော်လည်းငါ့ကိုကူညီပံ့ပိုးရန်ဆက်လက်ပြီအံ့သြမိပါတယ်. သင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုသာတိုးမြှင့်သတ္တုတွင်းရှိပါတယ်. အစောပိုင်းအငြိမ်းစားငါနေဖြင့်မအံ့သြခဲ့တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုမှာဒီတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်: "စောင့်ပါ, ငါသည်သင်တို့ကိုအငြိမ်းစားထင်?"ဒီအရိပ်ကဲ့သို့ငါ့ကိုပတ်ပတ်လည်မှာအောက်ပါအတိုင်းသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်. ငါအင်တာဗျူးများအတွက်ကြောင့်ဖြေရှင်းမယ့်, tweets, နှင့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များ, ဒါပေမယ့်ငါကဆဲအချို့မှမသိရသေးင်သိ. ငါ့ကိုစံချိန်ဖြောင့်တင်ထားရန်ကြိုးစားရန်ဆက်လက်စို့: ငါအငြိမ်းစားဘယ်တော့မှ. တွင် 2012, ငါ "ကိုပယ်ဂီတကနေနင်း။ " ဖြစ်င့်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်ဟုတ်ကဲ့, ငါအငြိမ်းစား-ish အသံသိ, ငါမူကားရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကြောင်းစကားလုံးကိုမသုံးခဲ့ပါ. ငါမကြောင့်ငါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမရေကြောင့်ထားရှိမည် 100% ကတူမယ်လို့အဘယျအသေချာပါ. ကျွန်တော်သိနှင့်နေတယ်...
သငျသညျဝါကွှားရန်တည်ဆောက်ခဲ့ကြတဲ့နေ့စဉ်သတိပေးထားဖို့လို? ကျနော်တို့အတူတူသင့်ရဲ့ဖုန်းများအတွက်အနည်းငယ်နောက်ခံပုံထားပြီးပြီ, တက်ဘလက်, ဒါမှမဟုတ် desktop. အဝါကွှားလိုဂိုနှင့်အတူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသုံးရိုးရှင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်. နောက်ပိုင်းတွင်လာဖို့ပိုရှိပါတယ်. နှစ်သက်! iPhone ကို Wallpaper • Desktop ကို Wallpaper Desktop ကို Wallpaper Desktop ကို Wallpaper Download iPhone ကို Wallpaper •ဒေါင်းလုပ်အိုင်ပက် Wallpaper • Download Download အိုင်ပက် Wallpaper • Download iPhone ကို Wallpaper • Download Download အိုင်ပက် Wallpaper • Download Download
ငါ့အသက်ကိုတစ်လျှောက်လုံး, ငါတကယ်ထွက်လုပ်ကိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြရတယ်သောအခါငါရာသီအားဖြင့်ကွယ်ပျောက်ပါဘူး. ငါအထက်တန်းကျောင်းတုန်းကကိုယ့်မိန်းကလေးများအထင်ကြီးဖို့လုံလောက်တဲ့ရိုက်ကူးဖြစ်ချင်တယ် (ငါပျက်ကွက်). ငါ၏အမင်္ဂလာဆောင်ရှေ့တော်၌ထိုလများတွင်ငါသည်ငါ့ပျားရည်ဆမ်းခရီးကမ်းခြေကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့. ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ, ကိုယ့်တာသေချာပါငါသည်ငါ့နှစ်ဆယ်ကျော်အတိတ်နထေိုငျအောင်ကြိုးစားနေတာပါ. အကြှနျုပျ၏တွန်းအားနှစ်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲပြီ, ဒါပေမယ့်အဘယျသို့ပြောင်းလဲသွားမမူသောသူတို့တွန်းအားဘယ်လောက်အပွောငျးအလဲဖြစ်ပါသည်. ဒီတစ်ခါလည်းသင်သဘာဝကျကျနေ့ရက်တိုင်းဟာသူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေး regimen ၏ pics နှင့်ဗီဒီယိုများကို post မူသောငါ့မိတ်ဆွေတွေထဲကထွက်-ကြွေးကြော်လုပ်ကိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေ. သင်တို့မူကားငါကဲ့သို့သောဆိုရင်, သင့်ရဲ့တွန်းအားတစ်ခု trampoline အပေါ်တစ်ဦးသည်ဆိတ်သငယ်နှင့်တူတက်ဆင်းသွား. သင့်ရဲ့အလုပ်ထုတ်ခြင်းမှရလဒ်များကိုအစဉ်အမြဲကြာလျှင်အဘယျသို့, သော်လည်း? သင်ပိုမိုလှုံ့ဆော်ဖြစ်ပါ့? ကြိုးစားအားထုတ်မှုငါလျှပ်စီးအမြန် bobsledders စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်နှင်းလျှောဘုတ်ပြား highflying အဖြစ်ပြီးခဲ့သည့်လကငါကိုကွောကျရှံ့ခဲ့ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်ကာလအတွင်းဟာ Off ပေးဆောင်. ငါသည်သူတို့၏အားကစားထူးချွန်သဖြင့်အထင်ကြီးခဲ့, ငါကအဲဒီကိုရောက်ဖို့မယူကြပြီရစည်းကမ်းလေ့ကျင့်ရေးစဉ်းစားကြသောအခါငါမူကား ပို. ပင်စွဲမှတ်ခဲ့. ထိုအောင်မြင်သောအားကစားသမားဆုရရဲ့အပေါ်ရပ်သောအခါအသီးအသီးအဖြစ်အပျက်ရဲ့အဆုံးမှာ ...
ဂီတငါ့အသက်ကို၏ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစဉ်မပြတ်ငါအကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုမည်သို့စဉ်းစားတာပါ. ငါ့ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းမရှိဘဲအနုပညာခံစားဘို့ဒါဟာခက်ပါတယ်, ယူပြီးမှတ်စု, နှင့်မေးခွန်းများမေး. Beyonce အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိူင်ငံရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရှိပြီးသူမသိသာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အများဆုံးချစ်ရာသခင်သည်ပေါ့ပ်ကြယ်တစ်င်. သူမအခြားမည်သူမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်လျှင်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးပင်ကပြောပါတယ်, သူမ Beyonce ဖြစ်ချင်ချင်ပါတယ်. Beyonce သူမအစဉ်အဆက်ကတည်းကရဲ့ထက်ပိုရေပန်းစားသည်, ဒါကြောင့်သင် TV ပေါ်မှာလှည့်မနိုင်သို့မဟုတ်သူမ၏အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုမြင်လျှင်မပါဘဲအွန်လိုင်းရ, သူမ၏အယ်လ်ဘမ်သစ်၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှသူမ၏သမီးနှင့်အတူလမ်းပေါ်ကိုဆင်းလျှောက်လှမ်းသူမ၏၏ဓာတ်ပုံများကိုမှ. ငါသူမ၏အခွက်တဆယ်အားဖြင့်အထင်ကြီးနှင့်သူမ၏ drive ကိုအားဖြင့်မှုတ်သွင်းတာပါ, ငါမူကားလည်းငါမြင်အချို့သောအရာအားဖြင့်စဉ်းစားရခက်တာပါ. Beyonce နဲ့ကျွန်မဘုံထဲမှာအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုမ. ကျနော်တို့တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကနေနှစ်ဦးစလုံးအနေဖြင့်, နှင့်ဟူစတန်ရှိမိသားစုအများကြီးရှိ. ကျနော်တို့တစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်၏တူညီသောအရေအတွက်ပတ်ပတ်လည်ဖြန့်ချိမယ့်သူအနေနှစ်ဦးစလုံးအနုပညာရှင်တွေ (သူမပဲနည်းနည်းပိုလူသိများငါ့ကိုထက်င်သော်လည်း). နောက်ဆုံး, ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်၏လိုအပ်ချက်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးသည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုင်. စိတျထဲမှာကအတူ, ဒီငါမေးနိုငျမေးခွန်းများကိုတချို့ရှိနေပါတယ်သူမ၏တွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင်, တချို့ ...
ငါကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသည်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ဆွေးနွေးတတ်, တစ်စုံတစ်ဦးကအကြောင်းငါနှင့်အတူသဘောမတူလျှင်ပင်. ကျွန်တော်တို့အငြင်းပွားစရာကိစ္စများအကြောင်းပြောနေတာတ​​ဲ့အခါ conversations သော်လည်းအထူးသဖြင့်စစ်မှန်သောတင်းမာနေမှန်ကန်မြန်ဆန်စွာရနိုင်. ဒါဟာသင်သည်သူတို့မှားထင်ပါတယ်ကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦးကပြောပြရန်ပျော်စရာဘယ်တော့မှဖွင့်. ဒါကြောင့်ငါသည်ငါ့စကားနှင့်သတိထားရန်ကြိုးစား, နှင့်ရိုးရိုးဘုရားသခငျသညျအဘယ်သို့မိန့်ထောက်ပြ, အစားငါ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်ထက်. မရောက်လိုပဲ, သော်လည်း, စကားဝိုင်းမှာစဉ်အတွင်းတစ်ချိန်ချိန်, သူတို့အသောတံပိုးမှုတ်ကတ်ကိုဆွဲထုတ်မယ်: "ဒါပေမယ့်ကမျြးစာကိုလည်းစစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်မဆိုပါဘူး? သငျသညျအဆင်သင့်သောကြောင့်ကျမ်းပိုဒ်ကျော်ကျော်သွား, ဟမ်?"ဒါဟာပျက်ကွက်ဘယ်တော့မှ. မဿဲခုနှစ်တွင်7ယရှေုသညျကပြောပါတယ်, "စစ်ကြောစီရင်တော်မူမနေပါနဲ့, သို့မဟုတ်သင်အရမ်းစီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ "ကမျြးစာကိုစကားလုံးသည်မိမိတရားဟောချက်စကားလုံး၏ဤအပိုငျးကိုးကားနိုင်ဖတ်ဖူးပါဘူးတဲ့သူတောင်မှသူတို့အကို. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်ကာလ၌အများဆုံးလူသိများတဲ့ကျမ်းဖြစ်စေခြင်းငှါ. ထိုသို့လည်းဤကျမ်းပိုဒ်ငါတို့သည်အချင်းချင်းချစ်ရထင်နေပုံကိုနားလညျမှုလှဲမှားဆိုလိုသည်အရှိဆုံးလွဲနားလည်မှုလွဲစေခြင်းငှါ. ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကမေးခွန်းမေးမြန်းကြောင်းအရေးကြီးပါတယ်: သူတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်ဖို့မကိုဖျောပွသညျ့အခါယရှေုသညျအဘယျသို့ဆိုလိုပါဘူး? သူကပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေဘာအဓိပ်ပာမဟုတ်, ဇနီးနဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းမှာလက်ထပ်ထိမ်းမြားအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်. ငါတို့ကဲ့သို့ ...
ငါဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာငါ့မိသားစု၏ဓာတ်ပုံများကို post အခါတိုင်း, တုံ့ပြန်မှုအမြဲပျော်စရာဖြစ်ကြ. အများဆုံးအဖြစ်များလေ့, "သင်၏သားဒါကြောင့်ချောမောသည်!လှပသော "သို့မဟုတ်" အဘယျသို့တစ်မိသားစု!"ဒါပေမယ့်အခြားဘုံတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, "သင်တို့၏ဇနီးအဖြူ Is?"လူတွေကလည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြသမှာငါ့ကိုမေးမြန်း. အဖြေကဟုတ်တယ်ဖြစ်ပါသည်. ကျွန်တော့်ဇနီးဟနျဂရေီတစ်ဦးရောနှောဖြစ်ပါသည်, အီတလီ, နှင့်-Polish သောလူအများစုမှပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုလိုသည်, သူမအဖြူင်. ဤသည်အချို့သောမှဆီလျှော်သည်, ဒါပေမယ့်အခြားသူများအားတုန်လှုပ်သို့မဟုတ်ပင်စိတ်ပျက်စရာ. ငါမည်သူမဆို interracial လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းဖြင့်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသို့မဟုတ်စိတ်ပျက်ရပါမည်မထင်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ငါဆဲငါသည်ငါ့ "အပြေးပြိုင်ပွဲပြင်ပမှာနဲ့လက်ထပ်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြောဆိုချင်တယ်. တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောတိုင်းရင်းသားနောက်ခံမှတစ်စုံတစ်ဦးကိုလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ငါ့အဘို့ခက်ခဲတဲ့တယောက်မဟုတ်ခဲ့. ငါထိုင်နေနှင့်တစ်ဦးအကောင်းအဆိုး cons စာရင်းထွက် wrote ဘယ်တော့မှ. ထိုသို့ပြုလျှင်သော်လည်း, ကျွန်တော့်ဇနီး "မာတင်" ၏တစ်ဦးဇာတ်လမ်းတွဲမမြင်ဖူးသောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအ con အမျိုးအစားထဲမှာပါလိမ့်မယ်. ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသား, ငါကကျော် agonize သို့မဟုတ်ပါက OK ကိုခဲ့တာရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. အကွံဉာဏျကိုမရှာခဲ့. ငါလက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်အဘို့အသူမသည်မိန်းမယုံကြည်တယ်ခဲ့သည်, သူမအနက်ရောင်မဟုတ်ခဲ့သော်လည်း. တချို့ကတူညီသောလူမျိုးစုမဟုတ်ခဲ့သူတစ်ဦးကိုလက်ထပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားတာပါ ...
ဂျက်စီကာ Barefield မှဧည့် post ကိုငါ့ကိုမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်ပေးခြင်းအားဖြင့်စတင်စို့. ဤဆောင်းပါးသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်မည်မျှဆိုးသောအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး. ဖြည့်ညှင်းအတွက်အသုံးပြု, လက်ျာနှလုံးကိုယ်ဟန်အနေအထားနှင့်အတူ, တကအံ့သြဖွယ်အရာရှိနိုင်ပါသည်. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လူမှုမီဒီယာစားသုံးမှုနှင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှကြွလာသောအခါဤဆောင်းပါး၏အမှတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာခရစ်ယာန်အသက်တာတစ်ဦးကြော့ကှငျးကိုဖွစျစနေိုနှင့်သင်၏နှလုံးကိုစစျဆေးဖို့သငျ့ကိုအားပေးကြောင်းနည်းလမ်းအချို့ကိုထောက်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ဤရွေ့ကားဆိုရှယ်မီဒီယာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပွစျရှိအလိုဆန္ဒများကိုအစာကျွေးနိုင်သည်ကိုငါးနည်းလမ်း. 1. လူမှုမီဒီယာဒါကကျနော်တို့ရှေ့တော်၌ကြားသိကြပြီမဟုတ်အချည်းနှီးဖြစ်၏သင်၏အချိန်ဖြုန်းနိုင်, ဒါပေမယ့်ထပ်ရကျိုးနပ်မယ့်. ကျနော်တို့ဧဖက်အတွက်သတိပေးနေကြပါတယ် 5:16-17 လက်ထက်၌ဆိုးယုတ်ကြ၏နှင့်ကျွန်တော်တို့အားအချိန်ရဲ့အကောင်းဆုံးအသုံးချသင့်ကြောင်း. သင်တို့ရှိသမျှသောသူတို့သည်ဆိုဒ်များစစ်ဆေးနေ၏အစားလုပ်နေနိုင်အဘယျသို့ခဏစဉ်းစားကြည့်ပါ. ရက်ချိန်းမှာစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်, ငါတို့သည်ငါတို့၏ဖုန်းပေါ်မှာအဘို့ဆုတောင်းကြလော့မှလူများစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်နှင့်ငါတို့မိသားစုနှင့်အဆွေတို့အဘို့ဆုတောင်းပဌနာသောသူတို့သည်အပိုမိနစ်သုံးဖြုန်းနိုင်. မုချ, တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်အခြားမှာ, ငါတို့ရှိသမျှသည်နေ့ရက်ကာလ၌ Facebook ပေါ်မှာနာရီဖြုန်းနှင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်ဘယ်တော့မှ၏အပြစ်ရှိကြောင်းရှိပါတယ် ...
သင်တစ်ဦးခက်အချိန်အားဖြင့်တာပေါ့သောအခါ,, လူကအမြဲပြောပါအဘယျမသိရပါဘူး. အဆိုပါရလဒ်အနတ္တclichéသို့မဟုတ်သင်ဖွင့်အားပေးစရာ trite ကြိုးစားမှုဖြစ်ပါတယ်. အစဉ်မပြတ်ငါclichéနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုသူတို့ကိုဟုလူတစ်ဦးမှဘာမှမဆိုလိုပါဘူးနှင့်အမှန်တကယ်သူတို့ကိုကြားနာပုဂ္ဂိုလ်မကူညီကြဘူးသောကြင်နာ phrases- ခဲ့တယ်. တူရီစရာအမှုအရာ, "ချင်းပြည်နယ်တက်" နှင့် "ဒါဟာပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ " တကယ်ပဲ? သင်ဘယ်လိုသိသလဲ? သင်သည်သင်၏အဆွေခင်ပွန်းတို့၌ရောင်ခြည်တော်ကိုပေးကမ်းခြင်းဖြင့်မည်သည့်မျက်နှာသာမပွု, တစုံတခုကိုအမြစ်တွယ်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်း fluffy မျှော်လင့်ချက်. ကြှနျုပျတို့လိုနက်ရှိုင်းသောနာကျင်မှု hits ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ထိန်းရန်အစိုင်အခဲသမ္မာတရားကိုကျောက်ရတဲ့အခါ. ကင်ဆာနဲ့သူ့ရဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းစဉ်အတွင်း, ခရစ္စတိုဖာ Hitchens ကျွန်တော်တို့ပတ်ပတ်လည်ချပစ်အအနတ္တစာပိုဒ်တိုများအချို့နဲ့ဆင်တူစိတ်ပျက်ထုတ်ဖော်ပြောဆို. သူကသူ့စာအုပ်ထဲတွင်သူတို့ထဲကတစ်ဦးတိုက်ခိုက်နေအနည်းငယ်စာမျက်နှာများကိုသုံးစွဲ, သေဆုံးမှု. သူကပြောပါတယ်, "အထူးသဖြင့်, ငါအနည်းငယ်သောကြေငြာချက်ထုတ်ပေးရပ်တန့်ပြီ '' သမျှငါ့ကိုအားကောင်းစေသည်ကိုသတ်မထားဘူး။ '' "သူကဆိုအပေါ်တတ်, "ဟုအဆိုပါ brute ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောက၌ ... သင်ကိုသတ်နိုင်သမျှသောလည်းအရာများစွာကိုရှိပါတယ်, သငျသညျမသတ်ဘူး, ပြီးတော့သိသိသာသာအားနည်းသငျသညျထားခဲ့ပါ။ "သင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမခံစားရနိုင်ပါ? ဒါဟာစိတ်ပျက်စရာအသံ, ငါမူကား Hitchens တစ်ဦးသဘောအရမှန်သည်ထင်. ထိုသို့ကျနော်တို့အတော်လေးဖြစ်နိုင်ပါတယ် ...
တိုင်းယခုပြီးတော့ငါသူတို့ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ချင်တယ်ကပြောပါတယ်သူတစ်ဦးမှစကားပြောပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကအချိန်အတော်လေးမှန်သည်မဟုတ်စဉ်းစားဟန်. ငါဘာကြောင့်သူတို့ကိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါ, သူတို့အပွစျမြားအပေါငျးတို့သအကြောင်းကိုပြောပြပါ, သူတို့ရဲ့ချို့ယွင်းချက်၏အားလုံး, သူတို့ကအတိတ်ကာလ၌ပြုကြပါတယ်အပေါင်းတို့နှင့်အတူတက် messed အမှုအရာ. ငါသည်သူတို့၏အပွစျမြားအကြောင်းကိုသူတို့နှင့်အတူငြင်းဘယ်တော့မှ, ငါမူကားသူတို့၏ယူဆချက်အပေါ်ပြန်တွန်းကြပါ. သူတို့ကအပြစ်တရားတစ်နည်းနည်းနဲ့ခရစ်တော်ထံသို့လာမယ့်ထံမှသင်တို့ disqualifies ကယူဆနေ, အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်စစ်မှန်တဲ့အခါ. အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်ခြင်းခရစ်တော်ထံမှကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မပါဘူး; ကျွန်တော်သူ့ကိုမလိုအပ်အကြောင်းရင်းင်. ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလက်ခံမှစုံလင်သောကြည့်ရှုသည်အထိကျွန်တော်တို့စောင့်ဆိုင်းနေလျှင်ကျနော်တို့အစဉ်အမြဲစောင့်ဆိုင်းနေပါလိမ့်မယ်. အကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးကိုးကားတ, ချားလ်စ် Spurgeon ကိုယျ့ကိုယျကိုမှရှာဖွေနေရပ်တန့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်း, ယရှေုသညျမှရှာဖွေနေစတင်ရန်. သူကပြောပါတယ်: "ဒီ! သငျသညျပွောဆို, 'ငါလုံလောက်တဲ့နောင်တရကြပါဘူး။ ' 'ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာနေပါတယ်ဒါက. 'ငါလုံလောက်တဲ့ယုံကြည်ကြပါဘူး။ ' 'ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာနေပါတယ်ဒါက. 'ငါအရမ်းမထိုက်တန်ဖြစ်၏။ ' 'ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာနေပါတယ်ဒါက. 'ငါရှာဖွေတွေ့ရှိမနိုင်,'' နောက်ထပ်ပြောပါတယ်, 'ငါမဆိုဖြောင့်မတ်သော။ ' 'ဒါကြောင့်သင်သည်မည်သည့်ဖြောင့်မတ်ရှိသည်မဟုတ်ကြောင်းပြောအတော်လေးမှန်သည်; ဒါပေမယ့်အဘို့အကြည့်ဖို့အတော်လေးမှားယွင်းနေသည် ...
5 စကားလုံးမြား vs.5မုသာစကား
ကျွန်တော်သတင်းစကားတစ်ခုတုံ့ပြန်အဆိုပါလမ်းကနေဖွင့်တဲ့သူအပေါ်မူတည်. ငါ့ကိုသငျသညျဥပမာတစ်ခုပေးပါရစေ. တကျွန်းတနိုင်ငံသားလမ်းပေါ်မှာငါ့ကိုအထိလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ကပြောပါတယ် အကယ်., "ငါ့ကိုကိုမှန်ကန်လျင်မြန်စွာသင့်ကားမှသော့ချေးပါစေ. ငါသည်သင်တို့၏လက်အိတ်သေတ္တာထဲကအချို့ပိုက်ဆံရချင်တယ်,"ငါသည်ဖြစ်နိုင်သူအရူးရဲ့ကဲ့သို့သူ့ကိုကွညျ့ရှုနဲ့ off လမ်းလျှောက်မယ်လို့. ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ဇနီးငါ့ကိုမှတက်လာခြင်းနှင့်တူညီသောအရာဆိုလျှင်, ငါဒုတိယအတွေးမပါဘဲသူမ၏သော့ပေးချင်ပါတယ်. အကျွန်ုပ်တို့သည်နားစကားပြောမယ့်သူကိုအပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားတုံ့ပွနျကွ. ဘယ်လိုအကြောင်းတစ်ပိုပြီးမြင်ကွင်း. အကြှနျုပျ၏ကောင်းသောမိတ်ဆွေတယောက်ငါသည်ငါ၏တစ်ခုလုံးကိုဘဝကျော်ကသူ့စုံလင်သောအခွင့်အာဏာမှတင်သွင်းရမည်ဟုအခိုင်အမာ အကယ်., ငါဖြစ်နိုင်သူအရူးရဲ့ကဲ့သို့သူ့ကိုကွညျ့ရှုနှင့်အချို့သောမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ရသွားလိမ့်မယ်. ငါ့ကိုအကြောင်းလမ်းတုံ့ပြန်ရန်အဘို့အထိုသို့ဒဏ်ငွေပါလိမ့်မယ်. သို့ရာတွင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်အလွန်တူညီသောအရာကပြောကြားခဲ့သည်အဘယ်သို့လျှင်?2တိမောသေ 3:16 ကပြောပါတယ်, "အားလုံးကျမ်းစာ၌ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းသည်။ " တပြင်လုံးကိုကျမ်းပိုဒ်မရဲ့, ဒါပေမဲ့အဲဒီငါးခုစကားတစ်သက်တာအဘို့တွေးတောဆင်ခြင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ပွောဆို. သမ္မာကျမ်း၏စကားသညျဘုရားသခငျ၏စကားကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါအချက်ကိုသိသာသည်. ထိုအခါငါသူတို့အားထင် ...
ဝါကွှား Pt ရန် built. 2
Air ကိုယော်ဒန်မြစ်အထင်ကရရှိပါတယ်. ငါအများကြီးသော်လည်းတက်ကြီးထွားလာသူတို့ကိုမဝတ်ခဲ့, မိဘတွေရဲ့ငါ့ကိုရီစရာစျေးကြီးဖိနပ်ကိုဝယ်ရန်ငြင်းဆန်သောကြောင့်,. ငါကမကြိုက်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ငါမတစ်စုံအပေါ်ငါ့လက်ကိုမရစဖူးပေသိသ. ဒါနဲ့ရငျဆိုငျဖွရှေငျးဖို့အတင်းအဓမ္မခဲ့ - သူတို့မတည်ရှိခဲ့ဟန်ဆောင်နေဖြင့်. ဒါဟာ Reebok လက်ဝါးကပ်တိုင်သင်တန်းဆရာစတိုင်ကွကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ဖို့ကြိုးစားနေနှစ်ပေါင်းကြာမြင့်စွာစုံတွဲခဲ့သည်. သို့သော်လည်းငါသည်အဟောင်းတွေတယ်အဖြစ်, ငါယော်ဒန်မြစ်ကိုလျစ်လျူရှုရန်ခက်ခဲခဲ့ကြသဘောပေါက်. သူငယ်ချင်းတွေကိုအားလုံးတစ်စုံသို့မဟုတ်နှစ်ခုခဲ့, နှင့်ငါ့မိတ်ဆွေတယောက်သူတို့နှင့်အတူကူးပြောင်းခြင်းကိုလုံးဝအစွဲအလမ်းခဲ့သည်. အသစ်တစ်ခုကိုစတိုင်ထွက်လာသောအခါ, သူအချို့အခမဲ့အချိန်သောအခါသူ့ကိုဒေသခံ Foot Locker အားဖြင့်ရပ်တန့်မလို; သူကအသစ်တစ်စုံရတဲ့ပတ်ပတ်လည်သူ၏အသက်တာကိုတည်ဆောက်. သူအပေါငျးတို့သယော်ဒန်မြစ်လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲများကိုသိသခြောလုပ်, သူကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အဆင်း၌တူညီသောဖိနပ်ကိုဝယ်မယ်လို့, သူကမကြာခဏဖိနပ်စတိုးဆိုင်များ၏ရှေ့မှောက်၌ထွက်စားခန်းချကြ၏စနေနေ့နံနက်သုံးစွဲသွားမည်ဟု. ဒါဟာကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးမှုတ်. ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်မေးမြန်းခဲ့ရ, "ဒီဖိနပ်အကြောင်းကိုဒီတော့အထူးကားအဘယျ?! ရှင်းနေသည်မှာငါတစ်ခုခုအပေါ်ထွက်ပျောက်ဆုံးတာပါ။" ယော်ဒန်မြစ်နဲ့ငါ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့စွဲလမ်းကြေညာချက်ကိုဖန်ဆင်း. စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်စေမ, သူဟူမူကားခဲ့သည် ...
ဘယ်သူကမှနာမကိုအမှီ droppers likes. သငျသညျငါအကြောင်းပြောနေတာပေါ့အဘယ်သူသိ. သငျသညျသူတို့သင်ဖြစ်နိုင်သိချင်သောလူကိုသိသောသိလိုသူများသည်လူ. ငါ "namedropper ထင်လာတဲ့အခါ,"ချက်ချင်းစိတ်ကိုမှကြွလာတကောင်လေးရှိတယ်. ငါသာသူ့ကိုအကြိမ်လက်တဆုပ်စာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်, ကျနော်တို့စကားပြောပြီးပြီဒါပေမယ့်အခါတိုင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောဆိုမှု၏ထက်ဝက်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း name ကိုပေါက်နှင့်အတူတက်ယူတတ်၏. သူက "ကြီးမားတဲ့အချိန်" လူ၌ကောင်းသောအရေအတွက်သိတယ်, သူကမဆိုစကားလက်ဆုံသို့သူတို့အားအမည်များကိုခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဖို့စိတ်ပျက်ဖွယ်စွမ်းရည်ရှိပါတယ်. ဒီနေရာတွင်ဥပမာတစ်ခုဖွင့်. ငါဆိုသည်ကား, "ဟေးလူ, ဘယ်နှစ်နာရီရှိပြီလဲ?"သူ့ပြန်ကြားချက်: "အိုး, ကမွန်းတည့်အကြောင်းကိုဖွင့်. ငါပဲရစ်မွန်းတည့်အချိန်၌မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်နှင့်အတူကျင်းစိမ်ရိုက်ချက်ကျင်းစိမ်ရိုက်ချက်ကစားသောအခြိနျကာလ၏အကြှနျုပျကိုသတိပေးနေပါတယ်။ "နှုတ်ကပတ်တော်ကို? ရိုးရိုးသားသား, ဒါကြောင့်ကိုယ့်သော်လည်းကျွန်တော်တို့ကို irk ကြောင်း droppers အမည်ကိုမ. ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်ဝါကွှားသူတွေကိုင်. ကျနော်တို့အရွယ်ရောက်လူတို့သညျကွားလြှငျငြီးငွေ့သူတို့၏အထက်တန်းကျောင်းဘောလုံးရက်ပတ်လုံးအကြောင်းကိုဝါကွှားရ (လှုပ်ရှားဖို့အချိန်တန်ပြီ, ခင်ဗျား). ကျနော်တို့ကိုသူတို့သွားရောက်တိုင်းထူးခြားဆန်းပြားရာအရပျနဲ့ပတျသကျတဲ့ tweet အချို့နည်းလမ်းရှာသောငါတို့အခွင့်ထူးခံမိတ်ဆွေပင်ပန်းသောသူကြီးထွား. ငါတို့အဘို့အဘယ်သူသည်အသေးစိတ်လူတို့အဘို့အများကြီးသည်းခံခြင်းသူတို့ဝယ်ယူတိုင်းစျေးကြီးကို item ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး (သူတို့အဆိုတော်တွေပါပဲမဟုတ်လျှင်, ဒါပေါ့). ကလျှို့လျှို့ဝှက်အကြောင်းကွှားပွောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ...
ကျနော်တို့တွင် Move သင့်ပါ?
ငါအစအဦးအနေဖြင့် Trayvon Martin က Saga နှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက်မယ့်. သငျသညျအများတို့သည်လည်းလိုပဲငါသတင်းလွှမ်းခြုံစောင့်ကြည့်, ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ရှု, နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူကအကြောင်းပြောဆိုသော. ဒါဟာအများပြည်သူစကားလက်ဆုံကြီးစိုးနှင့်အမေရိကတိုက်ရှိမျိုးနွယ်အကြောင်းအများကြီးလိုအပ်နေဆွေးနွေးမှုကိုနှိုးဆျော. လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၏အရုပ်ဆိုးအဖြစ်မှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာများများ၏ရှေ့မှောက်၌တွန်းခဲ့သည်, နှင့်ပင်သူတို့ကိုအကအမတည်ရှိပါဘူးဟန်ဆောင်လိုတဲ့သူကအကြောင်းပြောဆိုရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့ကြ. တစ်ကျော်တစ်နှစ်အကြာတွင်, Trayvon ရဲ့လူသတ်သမားကြိုးစားခဲ့အပြစ်ရှိမတှေ့ခဲ့. ကကျနော်တို့ကိစ္စများမှပေါ်လှုံ့ဆျောပေးသငျ့ဆိုလိုတာ? သူတို့ကသူ့ကိုအပြစ်မဲ့တွေ့ရှိရ, ထို့ကြောင့်ဤ "အပြေးပြိုင်ပွဲကိစ္စများ" ကျွန်တော်သူတို့ထင်သကဲ့သို့အမှန်တကယ်မဖြစ်ရပါမည်, မှန်သော? ဒါကသမ္မာတရားကိုမှထပ်မံမဖြစ်နိုင်. ငါအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်. ငြင်းခုံ၏အဘယ်သူမျှမရည်ရွယ်ပြီ, Trayvon ရဲ့ဇာတ်ကောင်, သို့မဟုတ်ဤကြေကွဲဖွယ်အခွအေနအတွက်စီရင်ချက်, ငါမူကားအချို့ဆွေးနွေးမှုကိုဆက်လက်သင့်တယ်ထင်ပါသလဲ. အဆိုပါတရားခွင်ပြီးဆုံး, ဒါပေမယ့်စကားပြောဆိုမှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး. အဘယ်ကြောင့်အတိုး? ငါသည်ဤအထူးသဖြင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးဤမျှလောက်များစွာသော၏အာရုံကိုဖမ်းထားပြီးအဘယ်ကြောင့်စဉ်းစားမိသူအများအပြားရှိပါတယ်သိ. အချို့သောအနက်ရောင်ရှေးရှေး Trayvon Martin ကနှင့်အတူစာနာဒါကြောင့်အမြန်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်အခြားသူများကတွေးမိ, မိမိ၏ကိစ္စရပ်များကိုခဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း ....
နေသမျှကာလပတ်လုံးငါမှတ်မိနိုင်သကဲ့သို့, ဟစ်ဟော့ဘုရားသခင်နှင့်ဘာသာတရားနဲ့စွဲရှိခဲ့ပါတယ်. ငါသည်ခပ်သိမ်းသောအဆိုတော်တွေဘာသာရေးသိုဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုဖို့ဆိုလိုဘူး. သို့သော်အနည်းငယ်အဆိုတော်တွေဟာ - သို့မဟုတ်ကကိစ္စဆိုအနုပညာရှင်တွေ - သူတို့ရဲ့အနုပညာအတွက်တစ်နေရာရာမှာဘုရားသခင့ပါဝင်ဖို့နေတာဆိုတော့ကိုလှုပ်နိုင်. ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်အကြောင်းပြောဆိုရန်အဘို့အဒါဟာသဘာဝကနှင့်ကောင်းပါတယ်, ဒါပေမယ့်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်, ငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြောနေ? တချို့ကဆိုရလိ​​မ့်မည်, "ဒါဟာကိုယ့်ဂီတရဲ့. ဒါကြောင့်အလေးအနက်ယူမနေပါနဲ့!" သို့သော်လည်းအဘယ်သို့တဲ့ရက်ပ်မိုက်ကရိုဖုန်းပေါ်ကပြောပါတယ်သင်ထင်စေခြင်းငှါထက်ပိုမိုလေးနက်သောဖြစ်ပါသည်. တချို့ကသူတို့ရဲ့စိတ်ရင်းဘာသာရေးယုံကြည်ချက်သို့မဟုတ် သိ. မရှိခြင်းဖော်ပြဟစ်ဟော့အသုံးပြုခဲ့ကြ. အစ္စလာမ်ဘာသာ, အဆိုပါငါးရာခိုင်နှုန်း, ခရစ်ယန်ဘာသာ, Agnosticism, ဘုရားမရှိဟူသောအယူ, နှင့်အခြားဘာသာတရားအားလုံးအနုပညာပုံစံကိုတဆင့်တိုးမြှင့်ခဲ့ကြ. ငါဟစ်ဟော့ကျနော်တို့အကြောင်းကိုအသည်းအသန်ပါပဲဘာမှမှသစ္စာရှိမှုနှင့်ဆည်းကပ်ဖော်ပြထူးခြားသင့်လျော်သည်ထင်. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ဆွဲဆောင်မှု rawness နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟစ်ဟော့ကိုပိုပြီးစကားသည်အခွင့်ပြုထားသောကြောင့်,, ဤသို့သင်အမှန်တကယ် "သွန်သင်နိုင်ပါတယ်။" သို့သော်အချိန်ဟစ်ဟော့အများစုပိုနင်္ဂနွေနေ့ကျောင်းမှအတန်းအစားထက်တစ် barbershop ကဲ့သို့ဖြစ်၏. အဆိုတော်တွေဟာမဆငျမခွခံတွင်းမှာချွတ်ပြေး, သူတို့အကြောင်းပြောနေတာသို့မဟုတ်မနေအရာကိုသိရှိမရှိ. ရိုးသားမှု vs. မဆင်မခြင် ...
ယခုနှစ်အစောပိုင်းကငါသည်ငါ၏အသစ်စာအုပ်နှင့်အတူခရီးစဉ်အပေါ်သွားလေ၏, အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ. တစ်ခုချင်းစီကိုညဥ့်အခါ, ငါမေးခွန်းကိုဖြေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဟောပြောချက်ပေးခဲ့တယ်, "ကကောင်းသောအသက်တာကိုအသက်ရှင်ဖို့ဘာကိုဆိုလို?" Chattanooga ခုနှစ်တွင်, TN, ကျနော်တို့သတင်းစကားကိုမှတျတမျးတငျထားငါအထက်က posted င်. အောက်တိုဘာလအပေါ်ထုတ်ပြန်တဲ့စာအုပ် 1, 2012 နှင့်သင်ဒီမှာကယ်ယူနိုင်ပါသည်. ထိုစာအုပ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်သင်ဒီမှာ click နှိပ်နိုင်ပါတယ်. သင်ဒီမှာကောငျးဘဝကအယ်လ်ဘမ်ယ်ယူနိုင်ပါသည်. သငျသညျအကောငျးဘဝနေထိုင်နေကြ?
သငျသညျအများစုဟာတစ်ရက်ပ်များနှင့်ဖျော်ဖြေသကဲ့သို့ငါ့ကိုသိ, ဒါပေမယ့်အမှန်တရား, နှလုံးမှာအစဉ်မပြတ်ငါတစ်တရားဟောဆရာဖြစ်သွားပါပြီ. နေသမျှကာလပတ်လုံးငါဂီတအောင်ခဲ့ပြီးပြီသကဲ့သို့, ငါ၏အအနက်ရှိုင်းဆုံးအလိုဆန္ဒဧဝံဂေလိတရားကိုကြားပြောစေခြင်းနှငျ့ယရှေုခရစျ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်ဘုန်းအသရေကိုကြေညာဖို့ခဲ့. ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာငါအများပြည်သူစင်ပေါ်မှာကလုပ်ဖို့ဂီတသုံးစွဲဖို့အခွင့်အလမ်းခဲ့တယ်. ငါကအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဒုတိယခစျြရင့်ခြင်းနှင့်ငါထူးချွန်နှင့်အတူကလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်. နှစ်တွေ, ငါသည်ဘုရားသခင်အကြှနျုပျကိုချေါနှင့်ဂီတစေမယ့်ငါ့ကိုတပ်ဆင်ခြင်းခံစားခဲ့ရပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းတရားကိုဟောပြောဖို့နဲ့ရေးသားဖို့. ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကငါကောငျးဘဝကရေးသားခဲ့သည်ဒါကြောင့်ဖွင့်, တူညီသောခေါင်းစဉ်ငါ့စံချိန်နောက်ကွယ်ကသတင်းစကားသို့နက်ရှိုင်း dives တဲ့စာအုပ်. ငါနောက်ဆုံးပြိုလဲကြေညာခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ငါမဖြစ်ရပြီအဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်တာခရီးသွားလာမရမယ်လို့လည်းဖွင့်. ငါသစ္စာရှိသောသင်းအုပ်ဆရာဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုခငျြ, နှင့်သာတကယ်ဒေသခံတစ်ဦးအသင်းတော်များ၏အခြေအနေတွင်ဖွစျနိုငျ. ဒါနဲ့ဝါရှင်တန်၌ငါ၏အသင်းတော်ကိုကြားမှာဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီဓမ္မဆရာများကနေလေ့လာသင်ယူမှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အချိန်ကိုယူပြီးတာပါ, DC က. ဆန္ဒရှိသခင်ဘုရား, ငါသည်ငါ၏အသင်းတော်ကိုကြားမှာဝန်ထမ်းများအပေါ်အစေခံအဖြစ်, ငါသည်လည်းနိုင်ပါလိမ့်မယ် ...
ဒီနေရာမှာငါဆာလံအပေါ်တရားကိုဟောမကြာသေးမီကတရားဒေသနာအနေဖြင့်အသံရဲ့ 142. ကြှနျုပျတို့အားလုံးခကျခဲကြိမ်ဖြတ်သန်းသွား, ဒါပေမယ့်ဆာလံပင်အဆိုးရွားဆုံးကာလ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၌ကြှနျုပျတို့လိုသမျှရှာဖွေနိုင်သည်ကိုပြသထားတယ်. အဆိုပါလေးအချက်များဖြစ်ကြသည်: ငါ. ဘုရားသခင့ Trouble II ၏ Times သတင်းစာအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပါသည်. ဘုရားသခင့ Trouble III ၏ Times သတင်းစာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်ပါတယ်. ဘုရားသခင့ Trouble IV ၏ Times သတင်းစာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရတနာဖြစ်ပါသည်. ဘုရားသခငျသညျအမှုရောက်သောကာလအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်နုတ်ဖြစ်ပါသည်
ဒီနေရာမှာငါမဿဲအပေါ်စုံတွဲတစ်တွဲ months ago တရားကိုဟောတဲ့တရားဒေသနာင် 12:36. ငါကသငျသညျတခုအားပေးမှုကိုရဲ့ဆုတောင်းပဌနာ.
အကြှနျုပျ၏စာစောင်၏လွှတ်ပေးရန်၏အခမ်းအနားများတွင်, အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ, ဒီနေရာမှာတစ်ဦးကဆယ့်ခြောက် "အတွက်တရားဝင်ဗီဒီယိုရဲ့," အကြှနျုပျ၏နောက်ဆုံးပေါ်အယ်လ်ဘမ်မှ, ဒါ့အပြင်အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝအသက်တာကိုခေါ်.
သူသည်မိမိနောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်အောင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်စံချိန်တင်မြင့်တက်ခြင်းနှင့်မကြုံဘူးဆွေးနွေးထားပါတယ်အဖြစ်ခရီးစဉ် Lee ကအတူနောက်ကွယ်မှတစ်ဦးကိုကြည့်လိုက်ပါ "အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝက။"
ဒီနေရာမှာငါကယေရမိအပေါ်တရားကိုဟောမကြာသေးမီကတရားဒေသနာင် 31:33. အကြှနျုပျ၏အဓိကအချက်များဖြစ်ကြသည်: ငါ. ဘုရားသခင့နိုင်ငံတကာ II ကိုအလုပ်လုပ်သည်. ဘုရားသခငျသညျသည်အလုပ်အဖွဲ့ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း III ကို. ဘုရားသခင့ Interpersonal IV အလုပ်လုပ်သည်. ဘုရားသခငျသညျအလုပျမှာ Is
အဆိုပါစာအုပ်အောက်တိုဘာလထွက်ကြွလာ 1, သင်မူကား, TheGoodLifeTheBook.com မှာနမူနာအခနျးတှငျဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်, သငျတို့သဒီမှာစာအုပ်-အမိန့် pre နိုင်.
ငါဤနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်များအများဆုံးစောင့်ကြည့်. ငါ၌အများပြည်သူကမက်ဆေ့ခ်ျနှင့်နှုတ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ထောက်ခံသူများကိုကူညီဒါပေမဲ့ Over-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ဘူး. ကစင်မြင့်ပေါ်မှာရှိသမျှသောလူတဦးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဇာတ်လမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ကြီးမားတဲ့ကတိတော်နှင့်သင်တို့ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးစား. ငါဝန်ခံပါလိမ့်မယ်, သူတို့၏အလိုဆန္ဒများအချို့ကိုမြင့်မြတ်သောခဲ့ကြ, ဒါပေမယ့်မိန့်ခွန်းအများစုကိုတွက်ချက်ခံစားခဲ့ရ, ဗလာ, နှင့်သက်သက်သာနိုင်ငံရေးအရ- ငါ့ကိုအနည်းဆုံး. ထိုစကားမှတ်တချို့ကလည်းဖြောင့်ဖွင့်မမှားခဲ့ကြ. သို့သော်ပလက်ဖောင်းဆွေးနွေးဒီ post များ၏အချက်မဟုတ်ပါဘူး. ငါသဘောပေါက်မှုအရာတို့ကိုတပါတီများသင်သည်သူတို့၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရောင်းဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြစဉ်ကခဲ့, သူတို့လညျးသင်သည်သူတို့၏ worldviews ရောင်းဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြ. သူတို့ကိုအလိုအရ, ပစ္စည်းကို propserity ကတိထားရာပြည်, နှင့်၎င်းတို့၏ပါတီသည်သင်၏မောရှသေညျဖွစျဖို့လိုသည်. သူတို့၏အမြင်တွင်, သငျသညျကွိုးစားအားထုသည့်အခါကောင်းသောအသက်တာကိုချမ်းသာကြွယ်ဝရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်၎င်းတို့၏သမ္မတလောင်းထိုပြည်၌သင်တို့သည်ယူနိုငျသူကိုကယ်တင်သောသခင်သည်. အခုတော့ဥစ္စာဓနအကြောင်းအပွစျရှိဘာမှမရှိဘူးင်. ထိုအခက်ခဲအလုပျအတှကျဆုခခံကောင်းတစ်ဦးအရာဖြစ်ပါသည်, ဘယ်မှာငါတို့မြော်လင့်သည်မုသာသို့သော်မဖွစျနိုငျ. စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆုံးပန်းတိုင်ကမဖြစ်သင့်ပါဘူး, ကကြီးမြတ်ဆုံးမှတစ်ဦးနည်းလမ်းများဖြစ်သင့်. ငါတို့သည်လည်းရန်မတတ်နိုင် ...
ဒီနေရာမှာငါဆာလံအပေါ်မကြာသေးမီကတရားကိုဟောတဲ့တရားဒေသနာင် 95:10-11. အကြှနျုပျ၏3မှတ်ရိုးရှင်းတဲ့ခဲ့ကြ: ငါ. သိန်သညျဘုရားသခငျရဲ့ဒေါသ II ကိုပြောခြင်းငှါ. သိန်တစ်ဦး Alernate Path ကို III ကိုဖြစ်ပါတယ်. သိန်ငါသည်ဤသငျသညျတခုအားပေးမှုသည်ဆုတောင်းပဌနာသညျဘုရားသခငျရဲ့ကြွင်းသောအရာထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်
အောက်တိုဘာလအပေါ်စာအုပ်ထွက်ရှိ 1, ဒါပေမဲ့အခုသင်ဒီမှာ-အမိန့် pre နိုင်.
တင့်တယ်ဘဝက "ပေါ်တွင်ခရီးစဉ် Lee က" Vimeo အပေါ်ဘုရားသခင့်တလျက်ကနေ. ငါသည်ငါ့လတ်တလောအယ်လ်ဘမ်အဘို့ရေးထားပထမဦးဆုံးသီချင်း, "အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ" "တင့်တယ်ဘဝကလို့ခေါ်တဲ့သီချင်းခဲ့သည်။" ခွေငျးငှာအလိုရှိသောဘုရားသခငျကနောက်ကွယ်မှထိုသီချင်းကိုနှင့်ငါ့နှလုံးအကြောင်းငါ့ကိုမေးခဲ့တယ်. ဤတွင်သူတို့၏တစ်ခုလုံးကို blog post: င်. ဒီမှာသီချင်းမှစာသားများမှာ, သော V ကိုတပ်ဆင်ထား. နှင်းဆီပန်း: ချိတ်: ရှင်သန်နေသောအတွင်းပိုင်းလှပသောဘဝကဒါမျှော်လင့်သူကတင့်တယ်လှပသောဘဝကအခနျးငယျကိုပေးတော်မူ၏သည့်အခါဘုရားသခင်သည်အကျင့်ကိုကျင့်ခဲ့သည်ကိုသိထပါစို့ရှူ Moving 1: ချစ်ခင်ရပါသောညီမ, ငါမမှာသင်ကရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းတစ်ဦးကလေးသင်၏ဝမ်းရှိရဲ့တဆင့်သွားလွယ်ကူသောအဘယ်အရာကိုမျှမကသိအရပျနားထောငျတျော, ဒါပေမဲ့သင်သိသည်မှန်လျှင်သင်ကနောက်ကျောကအားလုံးကိုယူချင်ပါတယ်ကြောင်းပြုပါကြိုးစားနေမခံခဲ့ရ, ဒါပေမဲ့သင်သည်သင်၏ချစ်သူနှင့်အတူဒါကအချိန်တစ်သဲလွန်စရှိသည်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်, သငျသညျသငျသညျမတ်ေတာသအောင်ခဲ့သည်ထင်သည့်အခါနှောင်းပိုင်းညဥ့်အခါ, သငျသညျဘဝစေယခုမှာကမမျှတ feeling ရဲ့, ဒါကြောင့်သင်ဘဝတယ်သည်မဟုတ်မကြိုက်သည်မဟုတ်လူ, ပစ်ခတ်, အချိန်ကိုက်တကယ်မှန်အတော်လေးငါသည်သင်တို့၏နာကျင်မှုနားလည်ကြောင်းသင်ပြောပြသို့သော်ငါသည်သင်တို့ကိုစိတျဓာတျနဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းမခံစားရသင့်တယ်သိထိုအခါငါသည်သင်တို့၏အစာအိမ်အတွက်ကလေးသူဟာတယ်ရဲ့တစ်ဂိမ်းမဟုတ်ကြောင်းမသိနိုငျပါတော့မဟုတ်ပါဘူး ...
မိမိဘဏ်ဍာအဘို့ဘုရားသခင့ရှိပါတယ်သောသူတစ်ခုမှာခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုရှိပါတယ်. အများစုကသာမန်ဘဏ္ဍာကိုသူ့ကိုငွငျးစေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်သူကသူတို့ကိုရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုလျှင်, သူတို့အခံစားဒါကြောင့်သူတို့ကသူ့ပျော်ရွှင်မှုလိုအပ်သောဖြစ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုစနစ်ဖြစ်ပြီးလိမ့်မည်. သို့မဟုတ်သူကသူတို့ကိုသွားတွေ့မြင်ရပါလျှင်, တဦးတည်းအပြီးတယောက်, သူခဲဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုသဘောခံစားရပါလိမ့်မယ်, ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို၏ရငျးမွစျရှိခြင်းများအတွက်သူတစ်ဦးအတွက်အားလုံးစိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်, အားလုံးပျော်မွေ့, အားလုံးပျော်မွေ့. သူကတကယ်တော့ဘာမှမဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ကိုဆုံးရှုံးစေခြင်းငှါဘာပဲ, အခုသူတစ်ဦးအတွက်ကအားလုံးကိုရှိပါတယ်များအတွက်, သူကသက်သက်သာကရှိပါတယ်, တရားဝင်နှင့်အစဉ်အမြဲ. A.W. Tozer, ဘုရားသခင်၏ကြိုးပမ်း
ကျမ်းစာပုလ်နှင့် Vimeo အပေါ်ဘုရားသခင့်တလျက်ကနေအခန်းက္ပ & Models ၏အရေးပါမှု. Desire ဘုရားသခငျသညျမှာငါ့အဆွေခင်ပွန်းငါ့ကိုခွန်အားကြီးဖို့အတားအဆီး ပတ်သက်. မေးခွန်းအချို့မေးခဲ့တယ်နှင့်မည်သို့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်. ဒီနေရာမှာငါကလည်းဘာ
ဤတွင် Raleigh အတွက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး Church မှာငါ့အမကြာသေးမီတရားဟောချက်ကနေဗီဒီယိုရဲ့, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနာ​​း. ငါမာကုအပေါ်တရားကိုဟော 5:1-20 အာဏာကိုအကြောင်း, အာဏာ, ယေရှု၏သနားတျောမူပါ. ငါကသငျသညျတခုအားပေးမှုကိုရဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်
ဘယ်လိုရောမ 8 ခရီးစဉ် Lee က Vimeo အပေါ်ဘုရားသခင့်တလျက်ကနေကူညီပေးသည်. Desire ဘုရားသခငျသညျမှာငါ့အဆွေခင်ပွန်းအများဆုံးငါ့ကိုကူညီပေးသည်ကြောင်းသမ္မာကျမ်း၏ကျမ်းပိုဒ်အကြောင်းကိုမျှဝေဖို့ငါ့ကိုမေးတယ်. ဒီဗီဒီယိုကလစ်၌ငါရောကျအခနျးအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ် 8
ခရီးစဉ် Lee က Vimeo အပေါ် Desire ဘုရားသခင်ထံမှတစ်ဦးစက်ရုပ်မဟုတ်. မကြာသေးမီကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းစဉ်အတွင်း, ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျ၏သီချင်းအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြရန်မေးလို, အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝအသက်တာကနေစက်ရုပ်
ဧဝံဂေလိတရားကိုအတွက်2မိနစ္မ်ား
ဧဝံဂေလိတရားကိုဆိုတာဘာလဲ? Vimeo အပေါ်ဘုရားသခင့်တလျက်ကနေ. Desire ဘုရားသခင့်ဖြင့်ငါအင်တာဗျူးမှနောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလစ်. ငါဝငျကမျြးထဲမှာ rap နိုင်လျှင်သူတို့ကငါ့ကိုမေးတယ်2မိနစ္မ်ား. ဤသူကားငါ၏ကြိုးပမ်းခဲ့သည်
ဤသူသည်ငါအလိုဆန္ဒသည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူပြုကြ၏အင်တာဗျူးတွင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်. DG Vimeo အပေါ် Hip-Hop နဲ့ Desire ဘုရားသခင်ထံမှသိန်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်သူတို့ကိုတက်တတ်၏အဖြစ်ကိုငါအခြားဒေသများ post လိမ့်မယ်.
သငျသညျ၏အဖြစ်အများအပြားသိ, ငါသည်ငါ့နောက်ဆုံးပေါ်အယ်လ်ဘမ်နှင့်အတူသွားကြဖို့စာအုပ်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြရတယ်, အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ. ကောင်းပြီဒီစာအုပျအောက်တိုဘာလအပေါ် Moody ထုတ်ဝေသူများနှင့်အတူလွှတ်ပါလိမ့်မည် 1, 2012. အောက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌အကြောင်းကိုဆက်ဖတ်ရန်. ထိုသို့ဖြန့်ချိသောအခါအကြောင်းကြားခံရဖို့ TheGoodLifeTheBook.com ကိုသွား. အောကျတိုဘာ ON ပွဲဦးထွက်စာအုပ်ကောငျးဘဝကိုလွှတ်ပေးရန် Hip-Hop အဆိုတော်ခရီးစဉ်လီ 1, 2012 Moody ညောဖြစ်အံ့ဆဲဆဲစီမံကိန်းကိုမှတဆင့်လက်ရှိအယ်လ်ဘမ်ဖြန့်ချိအပေါ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်မှမရှိတော့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသည်မုသာ၏အလငျး၌လူစိန်ခေါ်သဖြင့် "ဒီကောင်းမွန်သောဘဝက" redefines ကားအသစ်နှင့်ပိုပြီးဘုန်းပွင့်ခရီးစတင်. Los Angeles, ကာလီဖိုးနီးယား. (မေ 17, 2012) Lee ကမိမိအပွဲဦးထွက်စာအုပ်ဖြန့်ချိတက်သည်စိုင်းပြင်သည် -Billboard ဇယား-topping ဟစ်ဟော့အနုပညာရှင်ခရီးစဉ်, အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ (Moody ထုတ်ဝေသူများ). ဧပြီလတွင်ထုတ်ပြန်သည်တော်မူသောနောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်မှတစ်ဦးကဆက်လက် 10, 2012 ရော Records ကိုတဆင့်, အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝကအောက်တိုဘာလအပေါ်တနိုင်ငံလုံးစတိုးဆိုင်များ hit လိမ့်မည် 1, 2012. "နှစ်ပေါင်းများစွာ, ငါသည်ခရစ်တော်အားကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကြီးအမြင်များနှင့်ရမှတ်စိန်ခေါ်ကြောင်းဂီတလုပ်နေခဲ့ကြရတယ် - ဒါပေမဲ့အမြဲသီချင်းန့်အသတ်ရှိပါပွီ, သာဤမျှလောက်သင်တစ်ဦးသီချင်းအတွက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်ရှိပါတယ်ကွောငျ့,,"ခရီးစဉ်ကပြောပါတယ်. "ဒီအယ်လ်ဘမ်နားထောငျသူကောင်းကျိုးအသက်တာ၏ရိုက်ချက်ကိုပေး၏, နှင့်စာအုပ်လိမ့်မည် ...
ယခုအပတ်ပယ်ကောငျးဘဝအသက်တာခရီးစဉ်ကန်ဘော! သငျသညျအနီးဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်သည့်ရက်စွဲထွက်ရှာမည်. ကျနော်တို့ Minneapolis အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်, မီချီဂန်, ဗာဂျီးနီးယားသဲသောင်ပြင်, Nashville, Orlando တွင်, နှင့် Dallas မြို့. ပိုများသောရက်စွဲများအဖြစ်ကောင်းစွာမကြာမီဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်! လက်မှတ်တွေများအတွက်လင့်ခ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါသို့မဟုတ် ReachRecords.com/events ကိုသွား.
သူတို့သည်ငါ့အယ်လ်ဘမ်သစ် "ဒီကောင်းမွန်သောဘဝပေါ်မှာငါ့သီချင်း iLove မှသီချင်းစာသားဖြစ်ကြသည်။" အခြားသူမည်သူမဆို iLove မှခံစား? လင်္ကာ 1: အကြှနျုပျ၏ရည်းစားရဲ့နာမည်တခုငါသည်ငါ၏အနားမှာရှိနေမည်မိုဃ်းကောင်းကင်၌ကြယ်ကဲ့သို့တောက်ပထွန်းလင်းနှင့်အတူစတင်သည်, သူ့ရဲ့မှောင်မိုက်သူမသူမသည်အများအပြား befriends အလင်းကိုဖွင့်သောအခါ, ကျွန်တော်သူမစွဲလမ်းဖွင့်ကျွန်တော်နိုးပြီးမှငါတို့အသက်ရှုဖမ်းမပါဘဲသူမ၏မှ Run သူမ၏မှာစိုက်ကြည့်မယ့်အစားငါတို့ခြေရာကိုကြည့်သူမ၏မျက်စိ၌ပျောက်ဆုံးသွားရ, အမွန္တရား: ကျွန်တော်တို့ fiends င်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကော် sniffing သည်မဟုတ်, ကျနော်တို့သူမကကျွန်တော်တို့ကိုအုပျခြုပျအဖန်သားပြင်မှလျှက်ရှိကြောင်းင်, သူမကျွန်တော်ဖြစ်ကောင်းနှစ်ခုလူသားတွေသူမ၏အစ်မတွေကျော်သူမ၏နှစ်ယောက်ယူချင်ပါတယ်မြည်လာသောအခါသက်သေပြမြင်? တချို့ကပိုကြီးအချို့သောသေးငယ်တဲ့ကျနော်တို့သူမကကျွန်တော်တကယ်သူမ၏လိုအပ်တယ်ဆိုရင်သူမရဲ့မေးမတတ်နိုင်လျှင်ပင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်သည့်အခါကျနော်တို့သူမ၏ရနိုင်ရန်အတွက်သူမ၏စောင့်ရှောက်ရန်နေ့စဉ် em နှင့်အတူသူမ၏ sync? ငါကဲ့သို့ဖြစ်, "မျိုး" ဒါပေမယ့်ငါဆက်စပ်ပစ္စည်းများတွင်သူမ၏စောင့်ရှောက်သူမ၏တရားရုံးကိုခဲ့ကုန်တိုက်မှာသူမ၏မြင်ကြရသောအခါ, ကောင်လေးတစ်ယောက် ya ငါသည်ငါ၏အသက်တာ၌သူမ၏ချင်သူမ၏စာကိုလုယူကြပါ, သူမ၏မေ့ထားလိုက်ပါငါတစ်-Dime ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းဘာမှလုပ်ချင်ပါတယ်, သူမသူ့ကိုငါနှင့်အတူလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ရယ်လေးပုံတစ်ပုံနဲ့တူပိုပြီးင်,...
အကြှနျုပျ၏စတုတ္ထတစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်, "ဒီကောင်းမွန်သောဘဝ" တရားဝင်ဖြန့်ချိခဲ့! ဒီနေရာမှာ iTunes မှအယ်လ်ဘမ် Buy. သင်တို့သည်လည်း Lifeway မှာစတိုးဆိုင်များတွင်အယ်လ်ဘမ်ကိုတက်ခူးနိုင်, မိသားစုခရစ်ယာန်, Mardel, နှင့်ပစ်မှတ် & Wal-Mart (စတိုးဆိုင်များကို select လုပ်ပါ). လည်း, သငျသညျငါအကောင်းပေါ့ "အတှကျဗွီဒီယိုအသစ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်" ဤနေရာတွင် Lecrae featuring. ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီရပ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အသိပညာပေးနှင့်ယုံကြည်သူများအားပေးဖို့ဒီတစ်ခုပေါ်တွင်အာဇာနည်နေ့၏အသံနှင့်အတူပူးပေါင်း. သခင်ဘုရားကိုစိန်ခေါ်ဖို့ဤစီမံကိန်းသုံးပါနှင့်များစွာသောအားပေးလိမ့်မယ်လို့ဆုတောငျးလကျြအကြှနျုပျကို Join!
တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့အသေခံသောနေ့ရက်ကာလကိုမှတ်မိဖို့ကပုံမှန်ဒါဟာင်. တစ်ဦးကိုခစျြတစျခုပျောက်ဆုံးသူမည်သူမဆိုသင်သည်သူတို့အပေါ်အောင်မြင်ပြီးသောနေ့ရက်ကာလကိုဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်သိတယ်. ဒါဟာအသက်တာ၏အဆုံးဖွင့်, ထိုသို့ကှေဲဖှယျဖွင့်. ဒါပေါ့, လူသားတစ်ဦးအပြေးပြိုင်ပွဲအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ချစ်ရသူမသာသတိရကြပါ. အရေးကြီးသောအများပြည်သူကိန်းဂဏန်းများအချိန်မတိုင်မီသေဆုံးရသောအခါ, ကျွန်တော်တို့သတိရနှင့်သူတို့အဖြစ်ကိုကောင်းစွာငါတို့မှခေါ်ဆောင်သွားသောနေ့ရက်ကာလကိုညညျးတှား. ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးကိုနေ့ကမာတင်လူသာကင်း Jr ကအောက်မေ့. ပစ်ခတ်ခဲ့သည်, နေ့ကိုယောဟနျက F Kennedy ကအသတ်ခံရ. သို့သော်သူတို့အားအထူးသဖြင့်ရက်ပတ်လုံးကောင်းသောအဖြစ်ရည်ညွှန်းဘယ်တော့မှနေကြတယ်. သူတို့သညျကြောက်မက်ဖွယ်လက်ထက်၌, ချစ်သူတို့ယောက်ျားအန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ကြံသဖြင့်အသတ်ခံရဘယ်မှာ. သေး, နှစ်ထောင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းနာ​​ဇရက်မြို့သားယေရှုဟာသူ့ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ကြံသဖြင့်အသတ်ခံခဲ့, ကျွန်တော်ကောင်းမွန်သော "အဖြစ်ထိုနေ့၌သတိရ" သောကြာနေ့. အဘယ်အရာကိုအများဆုံးလူ့သမိုငျးလူကိုအကြောင်းပြောဆိုသောအခါ, နေ့ကိုအကြောင်းဒါကောင်းပါတယ်အကြမ်းဖက်မိမိရနျသူတို့ကိုအားဖြင့်ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်? လူဆိုးတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုသတ်မှကြံစည်မယ်လို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ပါသည်ကြောင့်ခြောအစဉ်အဆက်ကျူးလွန်အကြီးမြတ်ဆုံးအပွစျဖွင့်. ဒါပေမယ့်သူသေဆုံးရှေ့မှာသို့မဟုတ်ကြောင့်ပြီးနောက်အခြားမည်သည့်အသေခံမတူဘဲဖြစ်ပါသည် . ကျနော်တို့အကွောငျးရငျးမြားစှာအတှကျ "Good" ကိုသောကြာနေ့ထိုနေ့၌ခေါ်နိုင်ပါတယ်. သူ...
"ရပါတယ်" ငါ၏အအယ်လ်ဘမ်သစ်များအတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားရန်ပြီးခဲ့သည့်သီခငျြးမြား၏တစျခုဖွစျသညျ, အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ. Lecrae ငါကတကယ်တော့တစ်ဦးလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောသီချင်း wrote နှင့်မှတျတမျးတငျထား, ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးမှာကြိုက်တယ်. ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော့်ကိုတော်တော်လေးကောင်းသည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်; ကျွန်တော်အလွန်ကြီးစွာသောအရာတစ်ခုခုထွက်ထားချင်တယ်. ဒါကြောင့်ငါမသေးများအတွက်သီချင်းစာသားကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်မဟုတ်ခဲ့ကွောငျးကိုသူ့အဘို့အနည်းငယ်စည်းချက်ကစား, ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုနှင့်အတူမေတ္တာ၌နှစ်ဦးစလုံးခဲ့ကြ. ဒါဟာမော်ကွန်းခဲ့သည်, ကြူးကျြောသော, နှင့်မှတ်မိလွယ်တဲ့. ငါခရစ်တော်ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးအတွက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့သီခငျြးကိုရေးချင်တယ်သူ့ကိုသို့ပြောသည်. ငါကွောကျရှံ့ခွငျးတှငျနထေိုငျရပ်တန့်ဖို့ခရစ်ယာန်တွေကိုအားပေးနှင့်ရောမတွင်နေထိုင်သောစတင်ချင်တယ် 8. ကျနော်တို့က "ငါအကောင်းပေါ့ပေါ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်" အကွောငျး, ကျနော်တို့အကူအညီသခင်ဘုရားအဘို့ဟုမေး, ကျွန်တော်ရောကျရဲ့အတ္တလန်တာစတူဒီယို၏ဆန့်ကျင်ဘက်ထောင့်၌ရေးသားစတင်. ကျနော်တို့ထိုညဉ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသံအများစုမှတျတမျးတငျထား, ကအားလုံးကိုပြုလေ၏သောအခါကျွန်တော်ကိုခစျြ. မျှော်လင့်ထိုသီချင်းစာသား၏ဤရှင်းလင်းချက်ကိုအကြောင်းအရာ ... အခနျးငယျတွေဟာအစာကြေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ် 1: ငါဒုက္ခရဲ့အကြှနျုပျအဘို့လာမယ့်စကားကိုနားထောငျ, သေဆုံးသည်ငါ့တံခါးနားလမ်းမှာဖြစ်ပါတယ် / ကွောကျရှံ့ခွငျး I'ma bro ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကပြောပါတယ်, သို့သော်ငါ၏သခင်သူဟာငါသော်လည်းအပြစ်ရှိသည်မဟုတ်ဟုဆိုသည် / ပြောတဲ့စကားကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး ...
ဒီမှာက Man Up ကိုညီလာခံအဘို့အ Register နှင့်ငါ့အယ်လ်ဘမ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူ “အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ" ဒီမှာ
လူတိုင်းကိုချစ်သောခံရဖို့လိုလား. ကျွန်တော်ဝန်ခံသို့မဟုတ်မပဲဖြစ်ဖြစ်, ကြှနျုပျတို့အားလုံးအခြားသူများ adored နှင့်တန်ဖိုးထားခံစားရဖို့ဒီသဘာဝကအလိုဆန္ဒရှိ. ကျွန်တော်တို့အများစုကကျွန်တော်တို့ကိုခစျြမှတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုဘဝဖြုန်း, မျှော်လင့်ချက်ကတစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်- တယောက်ယောက်- အတွင်းအပြင်ဒီတောဝစွာကျွေးမည်. ကောင်းပြီဒီနေ့သင်အချစ်ဇာတ်လမ်းအတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆုံးရှုံးဖို့စီစဉ်နေတာပါနှင့်သင်နောက်ဆုံးကြောင်းတောငျ့ကျေနပ်အောင်လိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်လျှင်, ငါသည်သင်တို့ကိုသင့်ရည်မှန်းချက်လည်းအနိမ့်ကြောင်းသိလို. သင်တစ်ဦးဖယောင်းတိုင်အလင်းညစာမှာယနေ့ညအပေါင်းတို့၏အကြီးမြတ်ဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်. သို့သော်, တစ်ဦးအားလုံးအစွမ်းထက်ရှိပါတယ်, အားလုံးကျေနပ်, သငျသညျမှရရှိနိုင်စုံလင်သောမေတ္တာ. သငျသညျသငျသညျအစဉျအမွဲစိတ်ကူးနိုင်ထက်ပိုမိုချစ်သောသူတစ်ဦးသညျဘုရားသခငျရှိပါတယ်. သူ၏မေတ္တာအပွောငျးအလဲမဟုတ်ပါဘူးနှငျ့သငျကိုယ်တော်ကို woo သို့မဟုတ်ထိုသို့အလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. ဘုရားသခငျသညျမတ်ေတာသညျကြှနျုပျတို့ကိုမ? တစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့ကိုအများအပြားသညျဘုရားသခငျကိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်သောသူဖြစ်စေမစဉ်းစားမိသိ. သူကဒါဝေးပုံရသည်. သူကသည်ငါတို့အဘို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေတစ်ခုခုကိုပြုလျှင်ထိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော်တို့သံသယရပ်တန့်ချင်ပါတယ်. သမ္မာတရားကိုကျွန်တော်တို့ကို, သူဟာပြီးသားရှိပါတယ်. သမ္မာကျမ်းစာကဤသို့ဆို၏, "ဘုရားသခကျနော်တို့ဆဲအပြစ်များသောသူဖြစ်ကြသတည်းကြောင်းစဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသ, ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေခံတော်မူ၏။" တဖန်ကပြောပါတယ်,...
"ရောဘတ်စက်ရုပ်" ငါ၏အလာမည့်အယ်လ်ဘမ် "ဒီကောင်းမွန်သောဘဝအသက်တာ၏ပထမဦးဆုံးသီချင်းဖြစ်ပါတယ်" April လထုတ် 10. သီချင်းနှင့်အခမဲ့ download မှသီချင်းစာသားငါသည်သင်တို့၏စက်ရုပ်မဖြစ်ကြောင်းကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောများမှာ, ငါသင်တို့သည်ငါ၏ရုပ်သေးမဟုတ်ငါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်မဖြစ်ကြောင်းကိုတစ်ဦးကိုယ်ပွားအသစ်တစ်ခုကိုမာစတာတယ်မဖြစ်ကြောင်းကိုငါသွားကြောင်းအခနျးငယျတာမကုန်မှီတိုင်အောင်ငါကောင်းတစ်ဦးဘဝကိုချင်တယောက်တည်းကိုယ်တော်နောက်သို့လိုက် 1: ဟေ့ငါကအရူးအသံသိသို့သော်ငါတကယ်တစ်ဦးကလေးအဖြစ်ငါ၌အဘယ်သူမျှမစစ်မှန်သောဘဝတစ်စက်ရုပ်မွေးဖွားခဲ့သည်လူ့ထက်လျော့နည်းမွေးဖွားခဲ့သည်, ကိုယ့်အဘယ်သူမျှမကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်မှုကိုငါ့အခန်းကဏ္ဍက, ကိုယ့်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးမိန့်တယ်ကြားပြောလေ၏အမှုကိုပြု, ကိုယ့်တစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်သို့သော်လည်းငါသည်အခွင့်အလမ်းရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, ငါ့နှလုံးအကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးအမိန့်ကို ယူ. လမ်းအအေးခဲ့စေ, ငါနှောင်အောက်တွင်ရောင်းချမှိုကိုချိုးဖျက်နိုင်ဘူးငါပဲ, ငါ၏စက်ရုပ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူငါ့အစက်ရုပ်အဝတ်အစားတွေအတွက် chilling ခဲ့သည်ဒါနဲ့ထိန်းချုပ်မှုယူနိုင်ဘူး, နှင့်ငါ့စက်ရုပ်စက်ရုပ်နည်းလမ်းများ Living စီးဆင်း, ငါသည်ငါ့စက်ရုပ်ဝိညာဉျကိုမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြားသိမှီတိုငျအောငျငါသိအားလုံးရဲ့အကြောင်းရင်း, ငါတူရယ် ... သင်တို့၌အစဉ်အကြှနျုပျကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေအဘယ်ကြောင့် Hook? သငျသညျင်သောငါ၏သူဌေးကမဟုတ် ...
"အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ" ဧပြီလကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည် 10. ရယူ “ရောဘတ်စက်ရုပ်" ဒီနေရာမှာအခမဲ့
၏ပထမဦးဆုံးတစ်ဝက်များအတွက် 2011, ငါမသီခငျြးမြားကိုပြု, အဘယ်သူမျှမ features တွေ, အဘယ်သူမျှမပြသ, ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး. ငါဝါရှင်တန်ဒီစီပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ယူ5တစ်ကြေးအလုပ်သင်များအတွက်ပယ်လအတွင်း. ငါညစဉ်ညတိုင်းကမ္ဘာပေါ်တွင်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်လူဦးပင်လယ်များ၏ရှေ့မှောက်၌ရပ်နေမခံခဲ့ရသော်လည်း, ငါ့၏အသကျအမြားဆုံးအသီးကိုသီးရာသီတ. ထိုအလုပ်သင်အဆုံးသတ်သောအခါငါသည်နောက်တဖန်ခရီးသွားလာစတင်ဖြည်းဖြည်းချင်းအသစ်ဂီတအပေါ်စတင်လုပ်ကိုင်. ခန့်ငါသည်ငါ့စတုတ္ထတစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်တွင်လုပ်ကိုင်အပြည့်အဝဂီယာသို့ကန်လဲကျ. ထိုအခက်ခဲအလုပ်၏လအကြာ, အယ်လ်ဘမ်တော်တော်လေးအများကြီးပြု. ငါပင်ငါကလွှတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားထုတ်ဖော်ပြောဆိုမနိုင်. အစဉ်မပြတ်ငါကလူငါရှေ့တော်၌အပ်ပေးတော်မူပြီမဟုတ်တစ်ခုခုပေးဖို့ရှာဖွေနေတာပါ. ငါပြီးသားကိုဖန်ဆင်းပါတယ်အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုပြန်လည်အသက်သွင်းချင်ကြဘူး. ငါသည်သင်တို့ကိုသစ်ကိုအယ်လ်ဘမ်ပေးချင်, အသစ်ဂီတနှင့်အတူ, တူညီတဲ့အဟောင်းသမ္မာတရားကိုကျင်းပနေနှင့်နည်းလမ်းအသစ်များကို. တွင် 2006 ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအယ်လ်ဘမ်အပေါ်, သူတို့ကသာလျှင်သိလိုလျှင်, ငါကသူတို့ကိုသိလိုသူတစ်ဦးဘုနျးကွီးသောဘုရားသခင်အကြောင်းလူတွေကိုပြောပြချင်ခဲ့တယ်. တွင် 2008, "20/20" ထွက်. ငါကိုမှန်ကန်ရူပါရုံကိုနှင့်တကွသခင်ဘုရားကိုမြင်ရဖို့ဆိုတာဒီလူတွေကိုအားပေးချင်တယ်.2နှစ်ကြာပြီးနောက်, "အကြား ...
ဤတွင် display ကိုအပေါ် MLK ရဲ့ရဲရင့်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့ (အစဉ်အမြဲငါဖတ်ဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးအရေးအသားအချို့ကိုဖော်ပြခြင်းမ). သူကမတရားတဲ့ဥပဒေတွေဘက်ယမ်းငြင်းဆန်ခြင်းနှင့်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ဆိုင်းရန်ငြင်းဆန်. သူကလူဦးတစ်ခုလုံးယှဉ်ပြိုင်ကိုယ်စားအပေါ်ပဏာမခြေလှမ်းကြာ. အနက်ရောင်သောသူကဲ့သို့, သူ့ကိုငါကတဆင့်ပွီးမွောကျအလုပျအတှကျဘုရားသခငျအားနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်. ထိုအခါခရစ်ယာန်တစ်ဦးအဖြစ်, ကိုယ့်အဖြစ်ခက်သူပြုသကဲ့သို့တရားမျှတမှုအတွက်စစ်တိုက်ချင်, သာသညျယရှေုစုံလင်သောတရားမျှတမှုကိုဆောင်ကြဉ်းနိုင်မစိတျထဲတှငျစောငျ့ရှော. ထိုလိမ့်မည်. ဒီ MLK ရဲ့နာမည်ကျော်စာတစ်စောင်မှကောက်နုတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအခွင့်အလမ်းရလာသောအခါသငျသညျတပြင်လုံးကိုအရာဖတ်သင့်. "ကျနော်တို့ထက်ပိုပြီးအဘို့စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြ 340 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးထားအခြေခံဥပဒေနှင့်ဘုရားသခင်အခွင့်အရေးအတွက်အနှစ်. အာရှနှင့်အာဖရိက၏လူမျိုးတို့သည်နိုင်ငံရေးအရလွတ်လပ်ရေးရရှိမှုအပျေါအ jetlike မြန်နှုန်းနှင့်အတူရွေ့လျားနေကြသည်, ငါတို့မူကားဆဲနေ့လယ်စာကောင်တာမှာကော်ဖီခွက်ရရှိမှုဆီသို့မြင်းနှင့်ယုန်ကလေးအရှိန်အဟုန်မှာတွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်. အသားအရောင်ခွဲခြား၏လက်နက်လှံလက်နက်ခံစားခဲ့ရဖူးဘူးသောသူတို့အပြောအဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကလွယ်ကူသည်, "။ စောင့်ပါ" ဒါပေမယ့်သင်အလိုတော်မှာဆိုးအုပ်စုများ Lynch ကသင်၏မိခင်နှင့်ဘိုးဘေးတို့မြင်ကြပြီအခါထငျမှာညီအစ်မတို့၏ညီအစ်ကိုတို့နှင့်ရေနစ်; သငျသညျအမုန်းတရားကိုဖြည့်ရဲကျိန်စာမြင်ကြပြီအခါ,,...
ဒီနေ့ကျနော်တို့အရပ်ဖက်အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု၏ဗွေဆော်ခေါင်းဆောင်များ၏အမွေဆိုးဆင်နွှဲ, ဒေါက်တာ. မာတင်လူသာကင်း Jr က. သခင်ဘုရားသည်လူတမျိုးလာအောင်နှိုးဆွဖို့ဒီလူကိုအသုံးပြု, နှင့်တန်းတူရေးကိုဦးတည်နေတဲ့လူကိုရွှေ့. ပြုမိခံရဖို့အလုပ်လုပ်နေဆဲရှိပါသည်, သို့ရာတွင်သူ၏အလှူငွေတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောခဲ့သည်. အဘယ်သူမျှမသူရဲကောင်းစုံလင်သည်, နှင့်ဒေါက်တာ. ရှငျဘုရငျကိုအဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ခဲ့သည်, ငါမူကားနညျးလမျးမြားစှာမှာသူ့ကိုအရမ်းလေးစားမိပါတယ်ငါသည်သူ၏အမွေအားဖြင့်မှုတ်သွင်းတာပါ. ဤတွင်ငါ့ကိုအတုယူအားမိမိအသက်တာကိုအကြောင်းသုံးအရာဖြစ်ကြ၏. 1. တရားမ္တွဒေါက်တာဘို့စိတ်အားထက်သန်မှု. ရှငျဘုရငျသညျကြှနျုပျတို့၏ကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျပြံ့နှံ့ခဲ့သောမတရားမှုကိုစက်ဆုတ်စိတ်ပျက်မိကြောင်း, ထိုသို့ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေအားမိမိအသက်တာကိုဆက်ကပ်အပ်နှံ. သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်, သူကသူ့ကမ္ဘာကြီးအတှကျဘုရားသခငျ၏ရူပါရုံကိုမြင်လျှင်, သူကဖိနှိပ်မှုများ၏အဆုံးသည်အပရောဖကျတို့ခေါ်သံကိုမြင်လျှင်, နှင့်သူတရားမျှတမှုကိုသွားလာကြည့်ဖို့အသည်းအသန်ခဲ့သည်. ငါတရားမျှတမှုကိုအဘို့ဤစိတ်အားထက်သန်မှုအရမ်းလေးစားမိပါတယ်, ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျ၏ကိုယ်ပိုင်နှလုံးထဲမှာအလုပျလုပျဖို့ဆက်လက်ဆုတောင်းပဌနာ. ငါကူကယ်ရာမဲ့ဖို့ဧ​​ဝံဖိနှိပ်ဘို့စစ်တိုက်ခြင်းနဲ့ဟောပြောဖို့လိုခငျြ. 2. မိမိအနုပျိုနေသော်လည်းခေါင်းဆောင်မှု, ဒေါက်တာ. ရှငျဘုရငျ၏ပရောဖကျမိန့်ခွန်းနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားသောရူပါရုံကိုအလှုပ်ရှားမှု၏ခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာဖို့သူ့ကိုဦးဆောင်. သူကနောက်ကျောထိုင်နှင့်တိုင်ကြားဘဲ, သူအရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့် ...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနှင့်နှစ်သိမ့်ကျွန်တော်တို့ကိုချန်ထားလျှင်ပင်, ငါတို့သည်ငါတို့၏ဘုရားသခမလုံးဝနြို. ဧဇရ 9:9
ရက်သတ္တပတ်တစ်စုံတွဲလွန်ခဲ့တဲ့, ငါဧဝံဂေလိမှယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့တာဝန် ပတ်သက်. ကျောင်းပရဝုဏ်ကွင်းဆင်းအမျိုးသားညီလာခံမှာပွောဆို. ငါ့အကိုစာသားခဲ့သည်2ကောရိန္သု 5:18-21. ဒီနေရာတွင်က session တစ်ခုကနေဗီဒီယိုရဲ့. တစျခုမှာဘဝက | င်းကိုမျှဝေမည် - Vimeo အပေါ်ကျောင်းပရဝုဏ်ကွင်းဆင်းမှခရီးစဉ် Lee က. သငျသညျစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်, ဒီနေရာမှာကိုယ့်အဖြစ်ကိုကောင်းစွာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်တစ် panel ကဆွေးနွေးမှုကနေဗီဒီယိုရဲ့. အဆိုပါဆွေးနွေးမှုကျောင်းဝင်းဝန်ကြီးဌာနအကြောင်းခဲ့သည်, ဒေသခံခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း, မဟာကော်မရှင်, စသည်တို့ကို: Vimeo အပေါ်ကျောင်းပရဝုဏ်ကွင်းဆင်းမှဓမ္မဆရာများ Panel ကို. Plus အား, ငါသည်သင်တို့ကိုညီလာခံကနေအပေါငျးတို့သညျအခွားမီဒီယာထွက်စစ်ဆေးအကြံပြုပါသည်. ငါသည်သင်တို့ကိုကတည်ဆောက်ခံရဖို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ထင်ကြီးသှနျသငျတန်ချိန်ရှိခဲ့သည်.
ကျနော်တို့ဘယ်လောက်ဖြောင့်မတ်သက်သေပြဖို့တိုက်ခြင်း, ဖြောင့်မတ်သညျယရှေုသညျ လာ. ကြသည်မဟုတ်သူကိုမေ့. Matt 9:13
သင်ဠာ၏ဘုရားသခငျကိုငြင်းပယ်ကြပြီ? ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေ, ဒီကြှနျုပျတို့အားလုံးစဉ်းစားရန်အဘို့အအရေးပါသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာထာဝရအသကျလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘုရားသခငျသညျကိုးစားသောသူတို့အားပေးတော်မူသည်ကိုသမ္မာကျမ်းစာ၌ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်နှင့်သူ၏ဧဝံဂေလိယုံကြည်, ပဲတရားစီရင်ခြင်းကိုကိုယ်တော်ကိုငြင်းပယ်သောသူတို့အပျေါမှာထွက်ယူသွားတတ်၏. သို့ရာတွင်ဘုရားသခင်ကငွငျးပယျဖို့ပိုတစ်ခုထက်လမ်းလည်းမရှိ. ဒီနေရာမှာငါဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာတွေ့ရှိသုံးခုရှိပါတယ်. 1. ယရှေုသညျသူခဲ့ဟုဆိုသည်ကားအဘယ်သူသည်ကိုငြင်းပယ် "အဘယ်သူသည်မုသာကိုသုံးသောသူကားသူသညျယရှေုခရစျတျောဖွစျကွောငျးကိုငြင်းပယ်သောသူ? ဒါကအန္တိခရစ်ဖြစ်၏, ခမည်းတော်နှင့်သားတော်ကိုငြင်းပယ်သောသူသည်. သားတော်ကိုငြင်းပယ်သောသူတယောက်မျှမညျးတျောကိုရှိပါတယ်. အကြင်သူသည်သားတော်ကိုဝန်ခံလည်းမညျးတျောကိုရှိပါတယ်။" 1 ယောဟနျသ 2:22-23 ဝိညာဉ်ရေးရာသို့မဟုတ်ပင်ဘာသာရေးလူအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုစဉ်းစားတော်မူသောငါတို့၏ကမ္ဘာကယနေ့အတွက်များစွာသောလူရှိပါတယ်. သူတို့ကဘုရားသခငျသညျရှိကွောငျးယုံကြည်, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်သူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့ကြိုးစား. ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့ပင်တို့သည်ကြီးစွာသောဆရာသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်ထံမှပရောဖကျတအဖြစ်သညျယရှေုကိုမွငျ. ဒါပေမဲ့သူတို့သညျယရှေု HE သူကပြောပါတယ်သူအကြောင်းမယုံကြည်ကြပါလျှင်, သူတို့ကိုယ်တော်ကိုငြင်းပယ်ကြသည်. ရုံကွီးစှာသောအဖြစ်သညျယရှေုကိုမွငျလြှငျ ...
ခရစ်ယာန်များအတွက်, မေးခွန်းကိုကျွန်တော်တို့သွေးဆောင်မှုကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်ဖြစ်စေမမက, ဒါပေမဲ့ကြှနျုပျတို့ပွုသောအခါကြှနျုပျတို့တုံ့ပြန်မည်ကိုမည်သို့. လုကာခုနှစ်တွင် 4:1-2, ကျွန်တော်တို့ယေရှု၏သွေးဆောင်မှုအကြောင်းကိုဖတ်နှင့်မည်သို့သူတုန့်ပြန်. ဒီနေရာမှာကိုယ့်လအနည်းငယ်ပြန်ငါ့အသင်းမှာကျမ်းပိုဒ်အပေါ်တရားကိုဟောပြောမယ့်အတိုချုပ်တရားဟောချက်ကနေအသံင်. ငါသညျယရှေုသွေးဆောင်မှုကိုကြည့်ရှုချင်တယ်, သူ၏နာခံမှုအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်, ကျွန်တော်ဒီမြင်ကွင်းထဲကနေလေ့လာသင်ယူနိုင်သလဲဆိုတာကိုစဉ်းစား. WE သွေးဆောင်မှု၏ကာလ၌အောက်မေ့စေခြင်းအရာတို့ကိုဘာတွေလဲ? ဒီနေရာမှာအဓိကအချက်များဖြစ်ကြောင်း: ငါ. ဘုရားသခငျသညျကခွင့်ပြုသည်နှင့်သူ၏အစီအစဉ် II ၏အပိုင်းအဖြစ်သွေးဆောင်မှုကိုအသုံးပြု. အားနည်းခြင်းသွေးဆောင်မှုကို III ကိုမှခုနှစ်တွင် Give ဖို့ဆင်ခြေမဟုတ်ဖြစ်ပါသည်. စုံစမျးသှေးဆောငျယခုပင်လျှင်ငါကသငျသညျတခုအားပေးမှုကိုရဲ့ဆုတောင်းပဌနာ BragOnMyLord အားဖြင့်ယေရှု၏သွေးဆောင်မှုကိုရွေးကောက်ပွဲရှုံးခဲ့
ဘယ်လိုငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်? ဒါဟာခရစ်တော်အပြစ်ရှိသောသူခဲ့သည့်အတွက်တူညီတဲ့လေးစားမှုအတွက်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပါသည်. သူတစ်ဦးထုံးစံ၌ကြှနျုပျတို့၏နရောယူဆများအတွက်, ငါတို့အခန်းတစ်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်အံ့သောငှါ, နှင့်အပြစ်ရှိသောသူကဲ့သို့ဆက်ဆံစေခြင်းငှါ, မသူ့ကိုယ်ပိုင်ပြစ်မှုများများအတွက်, ဒါပေမယ့်တခြားသူတွေရဲ့သူတို့အဘို့, သူစင်ကြယ်သောအမှားကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသကဲ့သို့လြောကျ, ငါတို့ကိုကြောင့်ဖြစ်ဘူးသောအပွစျဒဏျကိုသည်းခံစေခြင်းငှါ,- မကိုယ်တော်တိုင်မှ. ဒါဟာတူညီတဲ့ထုံးစံ၌ဖြစ်ပါသည်, ဆက်ဆက်, ငါတို့သည်သူ့ကိုအတွက်ယခုဖြောင့်မတ်ဖြစ်ကြောင်းကို- မကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျင့်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၏တရားမျှတမှု, ငါတို့၏က rendering စိတ်ကျေနပ်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း, ငါတို့မူကားခရစ်တော်ရဲ့တရားသဖြင့်ဆက်သွယ်မှု၌စီရင်သောကြောင့်,, သောငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အပေါ်ထားကြပြီ, ဒါကြောင့်ငါတို့ဖြစ်လာစေခြင်းငှါ,. ဂျွန်ကယ်လ်ဗင်ဖြည်းဖြည်းချင်းဒီဖတ်ရန်နှင့်အထဲတွင်နစ်မြုပ်ကုန်အံ့! အပျေါမှာငါ့ message ကိုပြင်ဆင်နေစဉ်ငါသည်ဤကိုးကားအမှတ်မထင်2ကောရိန္သု 5:18-21 ထိုကျောင်းပရဝုဏ်ကွင်းဆင်းအမျိုးသားညီလာခံများအတွက်. ကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယ
ထိုအဘယ်သူမျှမကသတ္တဝါမျက်မှောက်တော် မှစ. Hidden သည်
ထိုအဘယ်သူမျှမသတ္တဝါမျက်မှောက်တော်မှဝှက်ထားလျက်ရှိ၏, ဒါပေမဲ့အားလုံးအဝတ်အချည်းစည်းဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်အကောင့်ပေးရမည်ဘယ်သူကိုမှသူ့ကိုတို့မျက်စိနှင့်ထိတွေ့. ဟေဗြဲ 4:13
ငါယူမယ်, ထိုအခါ, ယရှေုသညျခုနှစ်တွင်ဒါကမယုံကြည်သော
ငါယူမယ်, ထိုအခါ, ယေရှု၌ကမယုံကြည်သော (ယေရှု၌ယုံကြည်သူမဟုတ်ပါ) တစ်ဦးကအခြားအရာရာ၌စိတ်ကျေနပ်မှုကိုရှာနိုင်ရန်အတွက်ယရှေုသညျမှထွက်သွားသည်. ထိုအခါယေရှု၌ယူဆခကျြကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Long ၏စိတ်ကျေနပ်မှုအဘို့အယေရှုအားကြွလာ. ယုံကြည်ချက်ခေါင်းကိုအဓိကအားဖြင့်အချက်နှင့်အတူတစ်ဦးသဘောတူညီချက်မဟုတ်ပါဘူး; ကအဓိကအားဖြင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအဘို့သညျယရှေုအပေါ် fastens သောနှလုံး၌တစ်ဦးအစာစားချင်စိတ်ဖြစ်ပါသည်. [ယရှေုသညျကပြောပါတယ်,] '' ငါ့ထံသို့လာသောသူသည်ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်ငတ်မွတ်သူကရေငတ်ဘယ်တော့မှရကြလိမ့်မည်မဟုတ်မည်!'' ယောဟနျသ Piper
အကြောင်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကငါဒီတော့လူငယ်လက်ထပ်ပြီးအဘယ်ကြောင့်ရှေးရှေးပြောပြဘလော့ဂ် wrote. ငါနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသခင်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားအကြောင်းကိုပိုမိုသမ္မာကျမ်းစာစဉ်းစားရန်ကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့သူကဖတ်နှင့်ကြှနျုပျ၏ပဌနာခဲ့သောသူအပေါင်းတို့အနေဖြင့်တုံ့ပြန်မှုများကအားပေးအားမြှောက်ခဲ့သည်. သင်ဒီမှာကထွက်စစ်ဆေးကြောင်းမူရင်း post ကိုဖတ်ရဘဲနေလျှင်: အဘယ်ကြောင့်ငါအိမ်ထောင်သည်ဒီတော့လူငယ် Get ခဲ့? ကောင်းပြီဤမျှလောက်များစွာသောရှေးရှေးငါ့ထံသို့ထွက်ရောက်ရှိပြီးနောက်ကြောင့်ထိုသူတို့အဘို့အဘယ်သို့ထောကျအကူပွုခဲ့ပြောတယ်, ငါကငါ့ဇနီးစေမယ့်အဖြစ်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်ထင်, ဂျက်စီကာ, သူမ၏ရှုထောင့်ကနေတူညီတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေ. ဒီတော့ဒီမှာက. အဘယျသို့ကြှနျုပျ၏မယားဒီတော့လူငယ်ကိုလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လုပ်? သူမကပြောပါတယ်… 1. ငါပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်တွေ့ဆုံခဲ့သည့်အခါငါဘုရားရေးရာသောသူတယောက်ကိုတွေ့, ငါအချိန်မရွေးမကြာမီလက်ထပ်အပေါ်စီစဉ်မခံခဲ့ရ. သို့သော်အလွန်ပထမဦးဆုံးအကြိမ် မှစ. ငါတို့သည်ထွက်သွားကြ၏, သူ့ကိုငါအကြောင်းကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိခဲ့သိထား. သူကကိုယ့်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုငါ့အသက်အရွယ်၌တခါတစ်ခါမျှမယ့်လမ်းအတွက်ဧဝံဂေလိတရားကိုအကြောင်းအသည်းအသန်ခဲ့သည်. ငါသည်လည်းချိန်းတွေ့အပေါ်ထိုကဲ့သို့သောပညာရှိတဲ့ရှုထောင့်နှင့်အတူသူတစ်ဦးဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ဘယ်တော့မှ. ကောလိပ်ကျောင်းရှေ့တော်၌မိမိကတပည့ကျေးဇူးတင်သူကထင်အတိအကျသိ ...
ဒီနေရာမှာငါ San Diego မှအတွက်ယခုနှစ်အစောပိုင်းကတရားကိုဟောတဲ့တရားဒေသနာမှအချို့ video င်. ထိုကွန်ဖရင်၏ဆောင်ပုဒ် "မောင်းထုတ်ခဲ့သည်", ဒါကြောင့်ငါကရောမအပေါ်ဟောပြောဖို့ရှေးခယျြခဲ့ 12:1-2. အဘယျသို့က "မောင်းထုတ်ခံရဖို့တစ်ဦးယုံကြည်သူသည်အတူပါဘူး?" အကြှနျုပျ၏အဓိကအချက်များကိုယုံကြည်စေခဲ့ကြ ... 1. ကရုဏာဖြင့် Driven ကိုခံရ 2. ကိုးကွယ်မှုမှ Driven ကိုခံရ 3. မျှော်လင့်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့အထောကျအကူအသွင်ပြောင်းခြင်းကိုခံရ!
ကိုယ့်ကျွန်တော်တို့အာဖရိက၏အကြီးအတိုက်ကြီးအတွက်ခရီးစဉ်အပေါ်နေစဉ်သည်ငါတို့အဘို့ဆုတောင်းပဌနာသောသူမည်သည်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်. သခင်ဘုရားသည်သနားသောသူတို့အားဆုတောငျးခကျြမြားစှာကိုပြန်ပြော, ခြောက်ထောင်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိသည့်သက်ရောက်မှုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်အတူသငျသညျအသုံးပြု. အဆိုပါခရီးစဉ်ယခုနှစ်ကုန်ရောက်လာပြီကျွန်တော်အိမ်မှာယနေ့ညခေါင်းနှစ်လုံးနေကြတယ်. ကျနော်တို့ဘေးကင်းလုံခြုံခရီးသွားဘို့နှင့်ကျန်းမာရေးအဘို့သင့်ဆက်လက်ဆုတောင်းချက်တွေကိုတန်ဖိုးထားချင်ပါတယ်. ကိုအနည်းငယ်လည်းကောင်းစွာခံစားခဲ့ကြပြီမဟုတ်ငါတို့သည်အိမ်မှာကျန်းကျန်းမာမာဖြစ်စေလို. ကျနော်တို့ခရီးစဉ်အကြောင်းကိုသင်တို့ရှိသမျှကိုပြောပြမယ့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တင်မျှော်လင့်. ထို့နောက်အချိန်အထိငါတို့သည်သင်တို့၏ဆုတောငျးခကျြတန်ဖိုးထား
အခုကဖွင့် 12:34 ဘော့ဆွာနာ၌ရှိပါ၏. ဒါဟာအာဖရိကမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအပြည့်အဝနေ့ကဖွင်နှင့်သခင်အလုပ်မှာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်. မြေတပြင်လုံးရောကျယာဉ်အမှုထမ်းနောက်ဆုံးညဥ့်အခါဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်ကိုဆိုက်ရောက်နှင့်ဤနံနက်ဘော့ဆွာနာမှပျံသန်း. ကျနော်တို့ဒေသခံတစ်ဦးခရစ်ယာန်စာအုပ်ဆိုင်မှာကိုပြု၏တစ်ဦးလက်မှတ်ရေးထိုးမှာထောက်ခံသူတန်ချိန်ဒီနေ့လည်တွေ့ဆုံရန်တယ်ငါတို့သည်အချို့သောကြီးမြတ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့. မနက်ဖြန်ညခရီးစဉ်၏ပထမဦးဆုံးဖျော်ဖြေပွဲဖြစ်ပြီးကျွန်တော် amped နေကြတယ်. ကျနော်တို့တကယ်ကဒီခရီးစဉ်, အသီးအနှံများဖြစ်ချင်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏အကူအညီကိုချစ်လိမ့်မယ်. သင်ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်? သင်တို့သည်လည်းဆုတောင်းပဌနာသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီရမယ်, ဒါကြောင့်များသော၏ပဌနာမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဘို့ငါတို့ကိုယ်စားကျေးဇူးတင်စကားကိုငါပေးမည်.2ကောရိန္သု 1:11 ကျနော်တို့ခိုင်မြဲစွာသခင်ဘုရားကိုသူ၏အစီအစဉ်ကိုထုတ်သယ်ဆောင်ရန်သူ၏လူများ၏ဆုတောင်းတစ်ခုကိုယုံကြည်. ဒါကွောငျ့သငျဆုတောငျးလကျြခွငျးအားဖွငျ့ကြှနျုပျတို့ကိုကူညီပေးနိုငျ. ဒီနေရာတွင်သည်ငါတို့အဘို့နှင့်ငါတို့နှင့်အတူဆုတောငျးနိုငျအချို့သောအခြေခံကျနည်းလမ်း: 1. သခင်ဘုရားကိုကျန်းကျန်းမာမာနှင့်ခိုင်ခံ့သောကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မယ်လို့ 2. ကျွန်တော်တို့ကျွန်ကဲ့သို့ကိုယျ့ကိုယျကို posture မယ်လို့ 3. ထိုဖျော်ဖြေပွဲကောင်းစွာသွားလိမ့်မယ်လို့ 4. ကျွန်တော်တို့ရှားနေစဉ်ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့မိသားစုတွေကိုကာကွယ်မယ်လို့ 5. ခရစ်တော်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ...
ဤသည်စက်တင်ဘာလကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တိုတောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့အယ်လ်ဘမ်ဖြန့်ချိ “က Man Up ကို" ယောက်ျားဖြစ်လုလင်တို့ကိုစိန်ခေါ်ရန်. ဤတွင်များအတွက်ဂီတဗီဒီယိုရဲ့ “က Man Up ကိုနိုင်ငံတော်သီချင်း။" သင်သည်ဤအရပ်၌ရေတိုရုပ်ရှင်နဲ့အယ်လ်ဘမ်ယ်ယူနိုင်ပါသည်
ဤတွင်ငါသည်သစ္စာရှိသောဧဝံဂေလိအကြောင်းကိုယခုနှစ်အစောပိုင်းကဆုံးမသွန်သင်တဲ့အစည်းအဝေးကနေအသံင်. အချိန်ပေါ်တိုတောင်းသောသူတို့အဘို့ BragOnMyLord အားဖြင့်သစ္စာရှိသာသနာပွုဆရာ, ဒီမှာအမှတ်တစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်င်:5တစ်ဦးသစ္စာရှိဧဝံဂေလိဝိသေသလက္ခဏာများ ... 1. ကူးပြောင်းနှင့်ဧဝံဂေလိတရားကိုနားလည် 2. ယုံကြည်မှုနှင့်ဧဝံဂေလိတရားကို Unashamed 3. ထိုပျောက်ဆုံးသွားသောချစ်သောသူ 4. ရလဒ်များအဘို့ဘုရားသခင့အပေါ်မူတည် 5. ထိုပျောက်ဆုံးသွားသောအဘို့နှင့်ကအထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်မျှော်လင့် Share ဖို့အခွင့်အလမ်းများအဘို့ဆုတောင်း
ငါသီချင်းဆို "ဒီကျူးကျော်များအတွက်ဗီဒီယိုတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ပါဘူးသောသူသည်သင်တို့အဘို့အသူတို့အား (သူရဲကောင်း)" ဒီမှာပါ. နှစ်သက်! ငါကခရစ်တော်ပေါ်တွင်သင်၏မျက်စိစောင့်ရှောက်ဖို့သင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်.
မနေ့ကငါအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုဖမ်းပြီးမှစတိုးဆိုင်မှာနှောင်းပိုင်းတွင်ညဥ့်အခါရပ်တန့်လုပ်ကိုငါငွေရှင်းကောင်တာတွင်နှင့်အတူတစ်ဦးအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စကားပြောဆိုမှုခဲ့. သူမသည်ငါ့ပစ္စည်း scan ဖတ်အဖြစ်ကျနော်တို့သေးငယ်တဲ့ဆွေးနွေးချက်လုပ်, ပြီးတော့သူမငါ့ကိုလျှော့စျေးကဒ်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ်ငါသည်ငါ၏မယားကိုပြီးသားတစ်ရှိခဲ့ပါတယ်သူမ၏သို့ပြောသည်. စကားဝိုင်းမှာပျော်စရာတယ်သောအခါင်. ငါရှေ့တော်၌အကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ဖူးတဲ့အကြောင်းကြောင့်ငါသည်ခပ်သိမ်းသောလည်းကောင်းစွာဤစကားဝိုင်းသိ. ဒါဟာဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုဝင် ... ပုဂ်ဂိုလျ: ဘာ!? သငျသညျလက်ထပ်င်? ငါ့ကို: yeah ငါနှစ်ဦးနှင့်တစ်နှစ်ခွဲအံ့သြဖွယ်နှစ်ကြာလက်ထပ်ခဲ့ပြီးပြီ. လူ: အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ? သင်တစ်ဦးကလေးများကဲ့သို့ကြည့်ရှု. ငါ့ကို: ငါနှစ်ဆယ်သုံးတာပါ. လူ: သင်တို့သည်ဤမျှငယ်ရွယ်င်! သငျသညျကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျအဘယျကွောငျ့ပြုပါလိမ့်မယ်? ငါ့ကို: အဘယ်ကြောင့်ငါမလို? တွင် 2009, ငါနှစ်ဆယ်တယောက်သည်အသက်၏အနိုင်နိုင်ဥပဒေနှင့်အနိုင်နိုင်ဂုဏ်သရေရှိအသက်အရွယ်မှာလက်ထပ်ပြီး. ငါ၏အပိုးပန်းစဉ်ကာလအတွင်း, စေ့စပ်ထားခြင်း, တိုလက်ထပ်ထိမ်းမြား, တဖန်ငါတူမေးခွန်းများကိုအချိန်နှင့်အချိန်လို့မေးခဲ့ကြရတယ်, "အဘယ်ကြောင့်ဤမျှငယ်ရွယ်နဲ့လက်ထပ်ရ? မာပင်ကဘာလဲ?", နှင့်ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြိုက်ဆုံး, "သင်စောင့်ဆိုင်းနှင့်သင့်အသက်တာကိုခံစားသင့်တယ်!" ဤမေးခွန်းများကိုမေးရှေးရှေးတချို့ကသူစိမ်းခဲ့ကြ, သို့သော်အချို့မိသားစုခဲ့ကြ. ဒီလိုတစ်ဦး "လူငယ်မှာကိုလက်ထပ်ဖို့အရူးခဲ့သည်" အသက်အရွယ်?...
တိုင်းယခုပြီးတော့ငါပြန် သွား. နေသူတို့ကိုငါကြားသိသောအခါတကယ်အနုပညာနှင့်ဝိညာဉ်ရေးအကြှနျုပျကိုပြောင်းရွေ့ကြောင်းအယ်လ်ဘမ်နှင့်သီချင်းတွေကိုနားမထောငျ. သူတို့အားအယ်လ်ဘမ်တစ်ခုမှာရှေးလင်နန်က Solus ခရစ်စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာငါ့အကြိုက်ဆုံးဟစ်ဟော့အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်- ကာလ. ထုတ်လုပ်မှုထူးခြားသောဖြစ်ပါသည် (ငြာများကိုမသော်လည်း), အကြောင်းအရာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်ရှေးရဲ့ Lyrics ကျွမ်းကျင်မှုအပြည့်အဝပြသသည်. ဒီအဆိုတော်တွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့မေးမြန်းစေသည်သူတို့အားအယ်လ်ဘမ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, "အဘယ်ကြောင့်ငါနေဆဲနောက်တဖန် rapping ပါ၏?" ငါသည်ဤပို့စ်တွင်တပြင်လုံးကိုစံချိန်တင်ကိုးကားမနိုင်, ဒါပေမဲ့ဒီမှာအယ်လ်ဘမ်မှငါ့အကြိုက်ဆုံးကျမ်းပိုဒ်၏တဦးတည်းရဲ့. ဒါဟာ Mic Check "မှရှေးရဲ့အခနျးငယျရဲ့ 1,2": သူကတစ်ဦးရွေးနုတ်ဖိုးအဖြစ်သူ၏ဘဝ ပေး., ခရစ်တော်၏အကြှနျုပျသီခငျြးရွတ်ဆိုတဲ့အခါငါဖောင်းပွတယ်ငါကခုန်နေတယ်, အခြားသူကားအဘယ်သူသည်ငါ့မီးအိမ်ထွန်းဒါပေမယ့်လူမျိုးအ၏သခင် Self-ဘုန်းတော်ထင်ရှား၏ပင်တည်းစကားလုံးမပါဘဲရေးသားဖို့တစ်ဦးတပါးအမြိုးသားယစ်မူးသောဖောင်းပွနိုင်သလားသူကိုဖြောင့်မတ်သောသိုးသငယ်? အကြှနျုပျ၏အားနည်းသောစကားသည်- တကျိပ်နှစ်ပါး၏အသက်အရွယ်မှာအံ့ဖွယ်အကျင့်ကိုကျင့်ကိုလတ်ရဲ့စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောအမျိုးအနွယ်ကိုဖော်ပြရန်အမှန်ပင်မလုံလောက်, သူကသူ့အသိအမြင်မှာတအံ့တသြဟောင်းဦးခေါင်းသူ့မိဘများစကားကိုနားထောငျခဲ့, သူကသူတို့ရဲ့လေတိုက်ပိုက်တစ်ဦးကစစ်မှန်တဲ့ Anomaly နေသူများကဖန်တီးပင်သော်လည်း- သူကြှနျသညျဆငျခွငျနိုင်ပါတယ် ...
Trevin ဖယောင်းရုပ်မှ Excellent က post ကို. ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤအသနားတျောမူထံမှသင်ယူနိုင်, သမ္မာကျမ်းစာနှင့်စပ်ဆိုင်သော, စာနာမှုချဉ်းကပ်မှုကို http://bit.ly/oWNTno
ရက်သတ္တပတ်တစ်စုံတွဲလွန်ခဲ့တဲ့ငါတွေကလည်းလျော့ရဲရဲကနေချွတ်နှင့်ငါ့အကြိုက်ဆုံးပြည်သူပြည်သားအချို့နှင့်အတူကမ္ဘာ၏အခြားဘက်ခြမ်းမှခေါင်းနှစ်လုံး. Tedashii, Pro ကို, KB, Thi'sl, DJ သမား PDogg, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်မန်နေဂျာ Steadman, ငါသညျယရှေုကိုဝတျပွုဖို့သြစတြေးလျမှခေါင်းနှစ်လုံးခဲ့သည်. အဘယျသို့အကြှနျုပျတို့ဘရစ္စဘိန်းတဆင့်ခရီးသွားလာအောက်တွင်နှစ်ပတ်ချသုံးစွဲခဲ့, မဲလ်ဘုန်းမြို့, ပါ့သ, နှင့်ဆစ်ဒနီ. မြို့အသီးအသီးထဲမှာအကြှနျုပျတို့ထံမှအထိကြီးမားသောဖျော်ဖြေပွဲ၏တစိတ်တပိုင်းခဲ့ကြ 5,000-10,000 လူငယ်များ. ထိုဖျော်ဖြေပွဲခင်မှာ, ငါတို့သည်အချို့သောကျောင်းများမှ သွား. ပြသသူတို့ကိုထွက်ကိုဖိတ်ကြား. အဘယျသို့ကျနော်တို့ကျောင်းတွေအများအပြားမှာပြောခွင့်ပြုခဲ့သည်ကန့်သတ်ခဲ့ (သူတို့ Non-ခရစ်ယာန်ပြည်နယ်ကျောင်းများခဲ့ကြသောကြောင့်,), ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကျောင်းသားတွေကိုအားပေးနှင့်ခရစ်တော်ကသူတို့ကိုထောက်ပြဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုပြု. ထိုဖျော်ဖြေပွဲမှာ, ကြှနျုပျတို့အားလုံးငါးယောက်ဗရုတ်တဦးအဖြစ်အဆင့်ထိ, unashamed သင်္ဘောသား. ကျွန်တော်တို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုလုပျဆောငျဖို့လှုံ့ဆျောသောဧဝံဂေလိတရားအကြောင်းကိုတတ်နိုင်သမျှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေစဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအကောင်းဆုံးအဲဒီအဆင့်လှု. ကျွန်တော်တို့ရှေးရှေးယရှေုသညျသိလိုဘာမှထက်ပို! ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသေချာပါရှေးရှေးသဘောကျပြီးထွက်သွားအောင်ကြိုးစားကြည့်ပါ, မကျနော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့်, ဒါပေမဲ့ငါတို့သခင်အားဖြင့်. အကြှနျုပျတို့အားအဘယျသို့ရတယ်ကြုံတွေ့ ...
အဲရစ် Mason ၏မကြာမီကဧဝံဂေလိတရားကိုညွန့်ပေါင်းဗီဒီယို, Lecrae, ငါ့ကိုအနက်ရောင်ရှေးရှေးဆွေးနွေးခြင်းနှင့် “ပြုပြင်ပြောင်းလဲ" ဘာသာရေး
Name ကို	 အီးမေးလ်ပို့ရန်	 zip